प्रलयको सम्झनामा हलाचामा व्रत मनाउनु पर्छ? (स्तम्भ ४) - रब्बी माइकल अब्राहम
प्रलयको सम्झनामा हलाचामा व्रत मनाउनु पर्छ? (स्तम्भ ४)
18 टिप्पणी	/ Tu Elul 18 - 09/2016/XNUMX 18 / 09 / 2016
प्रलयको सम्झनामा ऋषिहरूले व्रत वा स्मरणको दिन किन तय गर्दैनन् भन्ने प्रश्न हरेक वर्ष उठ्छ। यदि तिनीहरूले गेडालिया बेन अहिकमको हत्या वा यरूशलेमको घेराबन्दीमा पर्खालहरू भत्किएको सम्झनामा उपवास बसेका थिए भने, यो सम्भव छ कि यस्तो दिन प्रलयको सम्झनामा सेट गरिनु पर्छ, जुन कम्तिमा असाधारण र विनाशकारी थियो, र। हाम्रो लागि धेरै अधिक सामयिक र स्पर्श। उत्तरहरू सामान्यतया हलाखिक अधिकार र शक्तिको प्रश्नको वरिपरि घुम्छन्। कोही-कोही यस तथ्यमा अडिग छन् कि हामीसँग क्लाल इजरायलको लागि बाध्यकारी दिन सेट गर्न सक्ने योग्य संस्था (सन्हेड्रिन) छैन। अरूले यसलाई हाम्रो सानोपन (राम्ररी सम्झने पुस्ताहरूको पतन) लाई श्रेय दिन्छन्। यी बहानाहरू उत्तम रूपमा बेहोस लाग्दछ। यदि पुरिम फ्रान्कफर्ट वा कासाब्लान्का सेट गर्न सकिन्छ, र यदि फलफूल वा स्मार्टफोन वा टेलिभिजनहरू प्रतिबन्धित गर्न सकिन्छ भने, त्यहाँ सम्भवतः अधिकार छ र आवश्यक पर्दा नयाँ कानूनहरू उत्पादन गर्न पर्याप्त हलाखिक शक्ति छ।
धेरैले यसलाई हेलाचिक Yvonne को रूपमा हेर्छन्, र मलाई लाग्छ कि यसमा न्यायको उचित मात्रा छ। त्यहाँ नयाँबाट यहाँ साँच्चै अनिच्छा छ, नत्र परिभाषाहरू उल्लङ्घन हुनेछ। सुधार वा सियोनिज्मको डर (अर्को चरणमा तिनीहरूले इजरायलमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थाल्नेछन्)। तर म यहाँ यस प्रश्नमा फराकिलो र फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
म साम्राज्यवादको पक्षमा गएँ
हामी सबैको धार्मिक शिक्षामा एक अनिवार्य तत्व हलाखाको समग्रता हो। यसले सबै कुरा समेटेको मानिन्छ, सम्पूर्ण भूमि सम्मानित छ र त्यहाँ खाली ठाउँ छ। सबै चीजहरू, र विशेष गरी मूल्यवान चीजहरू, हेलाचिक परीक्षण रिएक्टरबाट पास हुनुपर्दछ र यो पनि सम्बन्धित छ। सिक्काको अर्को पक्ष यो हो कि त्यहाँ कुनै मूल्यवान मूल्य वा कार्य हुन सक्दैन जुन हलाखाहमा प्रवेश गर्दैन र यसको अंश बन्दैन।
उदाहरणका लागि, धेरैले हलखाहको सामाजिक-आर्थिक कथन खोजिरहेका छन्। हलखा सामाजिक लोकतान्त्रिक, पुँजीवादी (संकेत: यो निकटतम जवाफ हो) वा कम्युनिस्ट हो? मर्निङ न्युजले समाजवादी हलखाह कस्तो छ, वितरणात्मक न्याय, पुँजीवादी, कम्युनिष्ट र यस्तै कुराको वकालत गर्ने भावुक भई लेख छाप्छ।
यी सबै पदहरूको लागि साझा धारणा यो हो कि हलखाह पक्कै पनि यी सबै मध्ये केहि हो। म यहाँ यो सामान्य धारणालाई अस्वीकार गर्न चाहन्छु, र यसलाई दुई तहमा गर्न चाहन्छु: क। मलाई लाग्दैन कि हलाखाबाट यी र यस्तै मुद्दाहरूमा स्पष्ट भनाइ निकाल्न सम्भव छ। बि. यो गर्न आवश्यक पनि छैन। हलचाको यस्तो भनाइ हुनुको कुनै कारण छैन। म अब अलिकति विस्तार गर्ने प्रयास गर्नेछु।
ए। के हलाखाको स्पष्ट वैचारिक कथन छ?
Halacha धेरै भनाइहरूको संग्रह हो जुन पुस्ताहरूमा, धेरै ठाउँहरूमा र विभिन्न परिस्थितिहरूमा र विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा विकसित भएको छ। यो सधैं मेटा-हलाचिक प्लेनमा एकरूपता हुँदैन। उधारिएको उदाहरणको रूपमा, हामी उपदेशको विषयमा माइमोनाइड्सको निर्णयहरू लिनेछौं। तिनीहरूसँग हलाखिक स्थिरता छ भनी मान्दा पनि, तिनीहरूले मेटा-हलाखिक स्थिरता कायम गर्दैनन्। सबैलाई थाहा छ, रब्बी अकिवा र रब्बी इश्माएलको बीट मिद्राश बीचमा टोराहको माग गर्ने तरिकामा असहमति छ (रिशका लागि - सामान्य र निजी, र आरए - बहुवचन र अल्पसंख्यकका लागि। Shavuot XNUMXa र समानान्तरहरू हेर्नुहोस्। )। त्यहाँ धेरै मुद्दाहरू छन् जसले यस मेटा-हलाखिक विवादमा विभिन्न हलाखिक प्रभावहरू ल्याउँदछ। माइमोनाइड्सले यी मध्ये केही मुद्दाहरूमा हलाखाहलाई नियमहरू दिन्छन्, र मैले पहिले नै अन्यत्र देखाइसकेको छु कि कहिलेकाहीं उसले प्रवचन सामान्य र निजीमा निर्भर हुने हलाखिक विचारको रूपमा शासन गर्दछ र कहिलेकाहीं उसले बहुलता र अल्पसंख्यकहरूमा निर्भर धारणाको रूपमा शासन गर्दछ। यसले मेटा-हलखिक स्थिरता कायम गर्दैन।
मलाई लाग्छ कि हलाखामा सामान्य रूपमा हलाखिक स्थिरता हुन सक्छ (र यो पनि मेरो विचारमा अलिकति बढाइचढाइपूर्ण भनाइ हो), तर यसले मेटा-हलाखिक वा वैचारिक स्थिरता जस्तो देखिँदैन, अर्थात् यसले व्यवस्थित, कम्युनिष्ट, पूँजीवादी वा अन्यलाई व्यक्त गर्दछ। सामाजिक-आर्थिक उप-विषय। विभिन्न स्रोतहरूले हामीलाई विभिन्न निष्कर्षमा लैजान्छन्, ती सबै बाध्यकारी छैनन्, तिनीहरू सबै प्रत्येक परिस्थितिमा लागू हुँदैनन्, तिनीहरूमध्ये धेरैको लागि फरक व्याख्याहरू छन्, त्यसैले तिनीहरूबाट व्यवस्थित मिश्नाह निकाल्न असम्भव छ। कहिलेकाहीँ स्पष्ट हलाखिक शासन जारी गर्न पनि सम्भव छैन, तर यो निश्चित रूपमा क्रमबद्ध हलाखिक मेटामा फरक पर्दैन।
यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि समस्या जटिलता, स्रोतहरूको बहुलता, वा त्यसो गर्न अन्य कुनै कठिनाइ होइन। म तर्क गर्छु कि त्यहाँ सायद उप जस्तो कुनै चीज छैन। मेरो विचारमा हलखाबाट यस्तो मिश्ना निकाल्ने जो कोहीले यसलाई भ्रममा पार्छ, वा कमसेकम विवादास्पद व्याख्यात्मक रचनात्मकतामा संलग्न हुन्छ। सङ्केतको रूपमा, मलाई लाग्दैन कि म यी मुद्दाहरूसँग व्यवहार गर्नेहरू मध्ये कसैलाई चिन्छु जसले हलाखाहको अध्ययन पछि आफ्नो वैचारिक स्थितिलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरेको छ (शायद एक विशेष परिस्थिति बाहेक जसको बारेमा उनीहरूले स्पष्ट हलाखिक कथन पाएका छन्)। यस्तो बहस तीर प्रहार पछि गोल सेटिङको रूपमा कहिल्यै जाँदैन। जो एक समाजवादी हो उसले टोरामा उसको समाजवाद भेट्टाउनेछ, र पूँजीवादी वा अन्य कुनै सामाजिक-आर्थिक अधीनस्थको हकमा पनि त्यस्तै हुन्छ। यसले बौद्धिक बेइमानीको गहिरो आशंका खडा गर्छ। सिद्धान्तमा एक सामाजिक-आर्थिक स्थिति हुनुपर्छ भनेर मानिसहरूले मान्छन्, तिनीहरू आफैंमा यस्तो स्थिति फेला पार्छन्, र त्यसपछि यस अराजक भ्रमबाट ठोस केही प्राप्त गर्न अविश्वनीय व्याख्यात्मक रचनात्मकता, चयनात्मक स्रोतहरूबाट चयनात्मक उद्धरणहरू र जस्ता अभ्यास गर्न थाल्छन्।
म मेरो शब्दको मार्जिनमा अर्को प्रश्न थप्छु: मानौं कि म हलाखाबाट व्यवस्थित वैचारिक-सामाजिक-आर्थिक उपविभाग निकाल्न सफल भएँ भने के त्यसले मलाई बाध्य बनाउनुपर्छ? कतिपय कानुनहरूले निश्चित सामाजिक-आर्थिक अवधारणालाई निहित गरेको तथ्यले मलाई यसलाई अवलम्बन गर्न बाध्य पार्दैन। म प्रतिबद्ध हुन सक्छु र यी कानूनहरू लागू गर्न सक्छु (यदि साँच्चै तिनीहरू बाध्यकारी छन्) अन्तर्निहित अवधारणा अपनाए बिना। तात्पर्य यो हो कि यदि यस अवधारणामा थप निष्कर्षहरू छन् जुन हलाखाहमा बाध्यकारी रूपमा सेट गरिएको थिएन - म तिनीहरूलाई बाध्य महसुस गर्दिन। बढीमा म भन्न सक्छु कि मसँग पनि मेटा-हलाचिक असंगति छ। मैले यस मामिलामा राम्रो संगतमा छु भनेर देखाइसकेको छु, हैन?
मलाई लाग्छ कि यदि हलाखाको यी क्षेत्रहरूमा इच्छा छ भने, म यसको बारेमा सबैभन्दा इमानदार कथन भन्न सक्छु कि हलाखाहले हामीलाई सामान्य ज्ञान प्रयोग गर्न र सभ्य र तार्किक रूपमा कार्य गर्न आवश्यक छ। अब देखि, सबैले आफैं निर्णय गर्नेछन् कि के अर्थपूर्ण छ र के अर्थपूर्ण छ र आ-आफ्नो सामाजिक-आर्थिक धारणा निर्माण गर्नेछ। यो धारणा टोरा र हलाचाको इच्छा हो। तर यो पक्कै पनि पहिलो स्तरमा मात्र हो, जबसम्म हामी मान्दछौं कि वास्तवमा यस्ता क्षेत्रहरूमा हामीबाट हलाखिक इच्छा छ। अब हामी दोस्रो चरणमा जान्छौं।
बि. सिद्धान्तमा स्पष्ट वैचारिक स्थिति हुनुपर्छ?
अब हामीले आफैंलाई सोध्नु पर्छ कि यी प्रश्नहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक स्थिति हुनुपर्छ भनेर किन मान्नुपर्छ? म यो हलाखिक साम्राज्यवाद बुझ्दिन, र मेरो सबैभन्दा राम्रो निर्णयमा यसले पानी समात्दैन। यस्तो स्थिति छैन र हुनुहुँदैन । हलखाहले यी प्रश्नहरूको सामना नगरेको कारणले मात्र होइन, वा विभिन्न कठिनाइहरू (ibid.) को कारणले यसबाट स्थिति निकाल्न गाह्रो भएको कारणले मात्र होइन, तर हुनसक्छ किनभने यसले (= हलाखिक सामूहिक?!) पनि छनोट गरेको छ (सायद अनजानमा। ) तिनीहरूमा संलग्न नहुने र तिनीहरूमा निर्णय नगर्ने। उनले तिनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तित्वको रूपमा देख्दैनन् र त्यसैले तिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिर छोड्छिन्।
म यहाँ स्वीकृत को लागी एक वैकल्पिक थीसिस प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। हामी सबै मानव हौं, र मानव समूहको एक हिस्सा यहूदीहरू हुन्। यहूदी पहिलो र प्रमुख एक व्यक्ति र त्यसपछि यहूदी हो, जस्तै मोहरम Tzitzaro Zatzokal भने: "कुनै पनि मानव मेरो लागि विदेशी छैन" (ibid।, Ibid।)। दुई तल्लाहरू बीचको यो विभाजनको साथसाथै, मूल्य संसार (यहूदी!?) लाई दुई तल्लामा विभाजन गर्न पनि सम्भव छ: 1. विश्वव्यापी तल्ला, जसमा एकातिर विश्वव्यापी मानहरू छन् र व्यक्तिगत मानहरू छन्। अन्य। 2. यहूदीहरूको लागि विशेष हलाखिक फ्लोर।
पहिलो तल्लामा मानहरू छन् जुन हलचामा समावेश गर्न आवश्यक छैन। केही किनभने तिनीहरू संसारमा सबै कुरा बाँध्न्छन् र केवल (सार्वभौमिक) यहूदीहरूलाई मात्र होइन, र केही किनभने तिनीहरूको अस्तित्व स्वैच्छिक र व्यक्तिगत रूपमा हुनुपर्छ र हलाखिक दायरामा आवश्यक पर्ने हामी सबैको लागि समान बाध्यकारी तरिकामा होइन।
ठट्टा पोनिभेजका रब्बीको नामले चिनिन्छ जसले प्रत्येक स्वतन्त्रता दिवसमा बेनी ब्रेकमा पोनिभेज येशिवाको छतमा झण्डा झुण्ड्याउने र बिन्ती भनेन तर प्रशंसा पनि गरेनन्। जब भगवानले यसको बारेमा भन्नुभयो कि उनी बेन-गुरियन जस्तै एक जियोनिस्ट थिए, बेन-गुरियनले प्रशंसा वा बिन्ती भनेनन्। मैले सुनेका धेरै अल्ट्रा-अर्थोडक्सहरू मूर्ख र दुष्ट जियोनिस्टहरूको खर्चमा यो मजाकबाट धेरै रमाइलो हुन्छन्, तर मलाई लाग्दैन कि तिनीहरू यसको अर्थको गहिराइमा गएका छन्। रब्बीको मनसाय बेन-गुरियन जस्तै ऊ धर्मनिरपेक्ष जियोनिस्ट थियो भन्नु थियो। उनको सियोनिज्म धार्मिक होइन, तर राष्ट्रिय मूल्य हो, र जसरी उनी हलाखाहमा प्रवेश नगरी पनि यसमा प्रतिबद्ध छन्। स्वतन्त्रता दिवस एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय बिदा हो जुन पोनिभेजको रब्बीले मनाइन्छ, र यसलाई धार्मिक चरित्र दिन र हलाखिक नियमहरूमा लङ्गर गर्ने उनको कुनै चासो थिएन।
प्रलय स्मरण दिवस मा फर्कनुहोस्
आज, इजरायलका मानिसहरूले प्रलयलाई विभिन्न तरिकामा सम्झन्छन्, जसमध्ये केही कानून र सामान्य सामाजिक अभ्यासमा निहित छन् र जसमध्ये केही व्यक्तिगत छन्। यी जस्तै यी तरिकाहरू मलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक लाग्दछन्, र मैले तिनीहरूलाई हलाखिक नियमहरूमा लंगर गर्ने कुनै आवश्यकता वा कारण फेला पारेन, यदि आज त्यहाँ त्यसो गर्न सक्ने सक्षम निकाय थियो भने। तिनीहरू माथि वर्णन गरिएका दुई मध्ये पहिलो तल्लासँग सम्बन्धित छन्, र तिनीहरूलाई दोस्रोमा सार्ने कुनै कारण छैन। प्रलय स्मरण दिवस एक राष्ट्रिय दिन हो जसको कुनै धार्मिक चरित्र छैन, र यसमा केहि गलत छैन। यसले यसको मूल्य गुमाउँदैन, र यो सत्य होइन कि मूल्यको सबै कुरा हलखिक वा धार्मिक ढाँचामा समावेश हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, स्वतन्त्रता दिवसमा म पक्कै पनि भगवानको जयजयकार गर्छु र भगवानको जयजयकार गर्छु, तर यसलाई धार्मिक महत्वको दिनको रुपमा र हलाखिको रुपमा पक्कै पनि देख्दिनँ । यसको अर्थ राष्ट्रिय हो, र म धर्मनिरपेक्ष जियोनिस्टको रूपमा (जस्तै पोनिभेज र बेन-गुरियनको रब्बी) यस आधारमा मात्र यसमा सामेल हुन्छु। म हिलेल भन्दिन किनकी प्रमुख रबिनेटले हिलेल भन्नु पर्ने निर्णय गरेको छ, र यो संस्थासँग मेरो परिचित सम्बन्धको कारणले मात्र होइन। म प्रशंसा भन्छु किनभने मलाई लाग्छ कि यो सही र राम्रो छ। एक धार्मिक व्यक्तिको हैसियतमा मेरो राष्ट्रिय स्थिति व्यक्त गर्ने मेरो तरिका यही हो।
त्यसोभए विगतमा के थियो?
विगतमा, तिनीहरूले वास्तवमा हलाखामा हरेक मूल्य र प्रत्येक मूल्य दायित्वलाई लंगर गर्थे। ऋषिहरू र दरबारहरू हुन् जसले व्रत र आनन्दका दिनहरू र हाम्रो समयहरू सेट गर्छन्। तर मलाई लाग्छ कि यो कृत्रिम अवस्थाको परिणाम हो जसमा इजरायलमा कुनै राजा छैन। रब्बीको उपदेशका लेखकले दुई समानान्तर शासन प्रणाली, राजा र अदालतको कुरा गर्छन्। कुनै कारणले ऋषिहरूको स्रोतमा राजाको व्यवस्थाको लगभग कुनै संकेत भेटिएको छैन। न्यायाधिकरणले समयमै सडक मर्मत गर्दैछ (सब एमओसी) अर्थात् यातायात मन्त्रालय थियो । तिनीहरूले नियमहरू परिमार्जन र कार्यविधिहरू स्थापना गर्छन्, समुदायमा मतदानका नियमहरू हलाखाद्वारा निर्धारण गरिन्छ र शुल्चन अरुचमा देखा पर्दछ। निस्सन्देह, तिनीहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (= मध्यस्थ) को सहमति चाहिन्छ। तर मलाई लाग्छ कि इजरायलमा कुनै राजा नभएको समयमा तोशबाप गठन भएको थियो र धर्मनिरपेक्ष-राष्ट्रिय सरकारको अधिकार राजाबाट महान् BID मा गएको थियो। त्यसकारण महासभाका अध्यक्षहरू दाऊदको घरानाका वंशका थिए, किनकि उनीहरूले वास्तवमा राजाको रूपमा सेवा गरेका थिए। त्यसबेलादेखि आजसम्म हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय आयाम छैन र सबै कुरा मध्यस्थ र अदालतको र हाम्रो धार्मिक र हलाखीक आयामको हो भन्ने कुरामा बानी परेको छ। राजाले हलाखाभन्दा माथिको हाम्रो आचरण निर्धारण गर्नुको सट्टा, बीडीले अन्यायपूर्ण रूपमा कुटपिट र सजाय दिन्छ। BID को यो अधिकार मौलिक सरकारमा राजाको अधिकारको प्रतिबिम्ब हो।
एउटै कुराको भागको रूपमा हामीले यो तथ्यलाई प्रयोग गर्यौं कि सबै कुरा टोरा थियो र सबै कुरा गयो। हलखाह भन्दा बाहिर कुनै सामान्य मानव जीवन, र निश्चित रूपमा कुनै मूल्यहरू छैनन्। कि सबै कुरा मध्यस्थ र रब्बीहरु द्वारा संचालित र निर्धारण हुनुपर्छ। तर आज दिनचर्यामा फर्कने मौका छ। इजरायलका जनताको BH मा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय आयाम छ (BH धर्मनिरपेक्षतामा होइन तर हामी सबैको जीवनको धर्मनिरपेक्ष आयामको फिर्तीमा। केहीले यसलाई इतिहासको चरणमा हाम्रो फिर्ताको रूपमा उल्लेख गरेका छन्)। विभिन्न ऐतिहासिक विकृतिका कारण हामीले जुन ढाँचामा अभ्यस्त भइसकेका छौं, त्यसमा अडिग रहनुपर्ने कुनै कारण छैन।
अन्त्यमा, प्रचलित अन्तर्दृष्टिको विपरीत, निर्वासनले हलखाहको क्षेत्रलाई मात्र साँघुरो बनाएको छैन (यद्यपि यो पनि केही सन्दर्भमा भएको थियो) तर तिनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा उचित शिक्षाभन्दा बाहिर पनि विस्तार गर्यो। मानिसले दिनचर्यामा फर्कनुपर्छ र हलाखाको हैसियतलाई साम्राज्यवादी सन्दर्भ र यसको क्षेत्रको बारेमा चिन्ता नगरी हाम्रो जीवनका सबै ठाउँहरूलाई आफ्नो पखेटामुनि कब्जा गर्न दिनुपर्छ। हाम्रा क्रिस्चियन भाइबहिनीहरूलाई व्याख्या गर्न, हामी नरकमा नजाऔं: कानूनमा जे छ त्यो दिनुहोस्, र राजा (वा मानिसलाई) जे उहाँको हो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा, प्रलय अस्वीकार र "तिमी पर्खनुहुन्न" (स्तम्भ 6)
Halacha र कानून मा सम्पत्ति कानून
प्रलय विनियोजन र क्षेत्रीयता - आदि ओफिरलाई (Haaretz पुस्तकहरू - 2001)
18 विचारहरू "के प्रलयको सम्झनामा हलाचामा उपवास हुनुपर्छ? (स्तम्भ ४)
29 Elul 09 - 2016/14/53 XNUMX:XNUMX बजे
के तपाईलाई लाग्दैन कि हलचामा क्रमबद्ध मिश्नाह भेट्टाउन नसकिने जसरी यसलाई पुस्तादेखि आकार दिइँदै आएको छ, लिखित तोराहको तहमा कम्तिमा एउटा भेट्टाउन सकिन्छ? मैले तपाईंको पुस्तकमा भगवान पासा खेलिरहेको देखेको छु कि तपाईंले बाइबल नैतिक मूल्यहरूको बारेमा होइन तर धार्मिक मूल्यहरूको बारेमा भन्नुहुन्छ। त्यो हो, तपाईको भनाइ अनुसार (मेरो बुझाइ अनुसार) सबै यहूदी धर्म, लिखित टोरा र मौखिक टोरा एक तह हो जुन मानिसको सामान्य जीवनबाट उत्पन्न हुन्छ र "धर्म" को श्रेणीमा पर्दछ। र म सोध्छु कि "धर्म" को वर्ग के हो, यसको अर्थ के हो? यसलाई कायम राख्ने व्यक्तिको लागि कुनै तर्कविना मनमानी मात्र हो? र जो कोहीले मित्भोसमा एउटा बिन्दु छ भन्ने सोच्दछ भने यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूलाई मानक र मानिस / समाज / मानवताको लागि सान्दर्भिक स्तरमा राख्नु पर्छ? र त्यो, उदाहरणका लागि, जाबोटिन्स्कीले गरे जस्तै शेमिता आर्थिक सिद्धान्तहरूको मित्भाबाट निकाल्न असम्भव छ?
यहाँ प्रस्तुत गरिएको कदमलाई अझै एक कदम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । मेरो लागि, निर्वासनले धर्मको साम्राज्यवाद मात्र सिर्जना गरेको छैन तर यसले सामान्यतया धर्मको वर्ग सिर्जना गरेको छ, जुन बाइबलबाट अनुपस्थित छ। आज्ञाहरू राष्ट्रिय लाभको लागि पहिलो र प्रमुख "देशमा त्यसो गर्न" दिइएको थियो। मलाई लाग्छ कि हामीले अहिले राखेका उपवासहरूलाई पनि तपाईंले आज राष्ट्रिय स्तरमा प्रलय स्मरण दिवसको रूपमा व्यवहार गर्न भन्नुभएको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।
म तपाइँको सन्दर्भ को लागी माया गर्छु।
मलाई लाग्छ पहिले त तथ्यपरक भेटिएन । गरिएका प्रयासहरू साँच्चै अविश्वासजनक छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि वास्तविकतालाई बेवास्ता नगर्नुहोस् र यसलाई हाम्रो इच्छाहरूको अधीनमा राख्नुहोस् (योग्य र राम्रो भए पनि)। मलाई लाग्छ लिखित टोरामा पनि यो एकदम अनाकार छ। पक्कै पनि सार्वभौमिक मानहरू जुन सबैले तपाइँलाई जताततै भेट्टाउनुहुनेछ। तर टोराह वा हलचाको अध्ययनले, मेरो विचारमा, तपाईंले आफैंले बनाएको धारणामा कुनै पनि परिवर्तन गर्दैन (र यो मेरो विचारमा पनि तथ्य हो, कि मानिसहरूले आफूले चाहेको कुरा भेट्टाउँछन्)।
म सहमत छु कि ऋषिहरूमा नैतिकता र धर्म र सायद ऋषोनीममा पनि भेद थिएन। एक अर्थमा निर्वासनले यो भिन्नता सिर्जना गर्‍यो (र सामान्यतया, हलाखाहको इतिहास पहिले नभएको भिन्नताहरूको सृष्टि हो। अन्तिमले मिश्नाह र यस्तै अन्य धारणाहरू बनाउँदछ)। तर मेरो विचारमा यो संसार अगाडि बढिरहेको छ (र पछि हटेको छैन) भन्ने अभिव्यक्ति हो। हामी अब बुझ्दछौं कि त्यहाँ दुई प्रकारका मानहरू छन्, जुन हाम्रा धेरै मालिकहरूले तिनीहरूको बीचमा पहिचान गरेका छन्। यसको सङ्केत (जसले हामीलाई उनीहरूले ध्यान नदिने कुराहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ) यो हो कि आज हामी देख्छौं कि धार्मिक प्रतिबद्धता बिना नै नैतिक हुन सम्भव छ। त्यसोभए किन धार्मिक प्रतिबद्धता धार्मिक उद्देश्यका लागि हो भनेर सोच्नुहोस्? यस दृष्टिकोणले आज यो अनावश्यक छ।
धार्मिक उद्देश्यहरूको व्याख्याको लागि, तपाईंले मान्नु हुन्छ कि नैतिकताको मूल्यभन्दा बाहिर कुनै मूल्यहरू छैनन्। यो एक धारणा हो जसमा म आधार देख्दिन, र निश्चित रूपमा टोराह र हलचालाई हेर्दा होइन। चीजहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण भागको लागि त्यहाँ मलाई नैतिक तर्कसंगतता फेला पार्न सकिँदैन जस्तो देखिन्छ। त्यसोभए सबै नैतिकताको लागि हो भनेर किन मान्नुहुन्छ? मेरो विचारमा त्यहाँ फेरि हृदयको चाहनामा टाँसिएको छ र तथ्यहरूको बेवास्ता छ।
1. यो स्पष्ट छ कि alibi de बाइबलीय अनुसन्धान, यदि बाइबल विभिन्न विद्यालय र विश्व दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व गर्ने फरक स्तर हो भने, त्यहाँ कुरा गर्न को लागी केहि छैन। तर यदि हामीले बाइबलको प्रकटिक आयामलाई स्वीकार गर्छौं भने, वास्तवमा मेरो विचारमा पदहरूको अध्ययनको प्रकाशमा एक निश्चित स्थितिलाई ढाँचा वा परिष्कृत गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, रोयल्टी संग बाइबल को सम्बन्ध एक मुद्दा हो जुन मलाई लाग्छ कि निश्चित रूप देखि एक कठिन व्याख्यात्मक विश्लेषण द्वारा चर्चा गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, मलाई लाग्छ कि माइमोनाइड्स, जसले राजाको मुद्दामा इजरायलमा राजाको नियुक्तिको पत्र देखे, त्यहाँ सम्पूर्ण अध्यायको सरल अर्थलाई बेवास्ता गरे। हामीले आफ्नो स्थितिमा विश्वस्त हुने अर्कोलाई विश्वस्त गर्न सक्षम नहुन सक्छौं (जसरी हामी डकिन्सलाई विश्वस्त पार्न सक्दैनौं) तर पक्कै पनि, मलाई लाग्छ बाइबलीय अध्ययनले धेरै मुद्दाहरूमा नयाँ अन्तरदृष्टि ल्याउन सक्छ। सामान्यतया मेरो धारणा यो हो कि मानव नैतिकता र तोरामा लेखिएको कुरा बीच कुनै विरोधाभास हुनु हुँदैन जुन अब्राहामले सदोमको विनाशको सामना गर्दा कराएको थियो। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि बाइबल मात्रै स्क्र्याचबाट नैतिक अवधारणा सिर्जना गर्न पर्याप्त छैन तर यसले मद्दत गर्दछ।
2. धार्मिक प्रतिबद्धता बिना नैतिक हुन सम्भव छ भन्ने तथ्यले कसरी दुई वर्गहरू छन् भनेर संकेत गर्छ भन्ने कुरा मैले बुझिन। म केवल धार्मिक नैतिक हो भनेर दावी गरिरहेको छैन तर निश्चित रूपमा मिट्जभोसको उद्देश्य एउटै वर्गको हो। तथ्य यो हो कि एक सधैं mitzvos को स्वाद बुझ्न सक्षम छैन "धार्मिक" वर्ग को अपनाउनु आवश्यक छैन। कहिलेकाहीँ हामी अनिवार्यता देखा परेको छ भनेर बुझ्नको लागि ऐतिहासिक सन्दर्भको अभाव हुन्छ तर यसको मतलब नैतिक कारण अवस्थित छैन भन्ने होइन। विशेष गरी तपाईंले मलाई "धार्मिक मूल्य" को सकारात्मक परिभाषा दिनुभएन। यस बिन्दुमा, म मान्न सक्दिन कि त्यहाँ "धार्मिक" वर्ग छ जुन मलाई थाहा छैन "पूर्ण प्वालहरू" के हो।
1. त्यहाँ कुनै विरोधाभास हुनु हुँदैन, तर नवीकरणको सम्भावना छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो। के एक व्यक्तिले बाइबलको अध्ययन पत्ता लगाउन सक्छ जुन उसलाई स्वीकार्य छैन र उसको अध्ययन पछि धारणा परिवर्तन गर्न सक्छ। यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राजतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने अबरबानेलले बाइबलमा आफ्नो अवधारणा भेट्टाए, र इन्कार नगर्ने माइमोनाइड्सले आफ्नो अवधारणा भेट्टाए। आज पनि त्यस्तै छ।
यो स्पष्ट छ कि कुनै पनि क्षेत्रमा र कुनै पनि पुस्तक वा चलचित्रमा कुनै पनि अध्ययनले प्रश्नहरू खोल्छ र धारणा परिवर्तन गर्न सक्छ। तर परिवर्तन बाइबलको अख्तियारको आधारमा नभई आन्तरिक प्रक्रियामा हुनेछ (यसकारण मैले त्यहाँ फरक निष्कर्ष पाएको छु भने म आफैलाई कुनै मुद्दामा मेरो अडान परिवर्तन गर्न बाध्य गर्छु)।
२. मसँग धार्मिक मूल्यको कुनै परिभाषा छैन। तर उदाहरणको रूपमा म भन्छु कि कोहेनकी श्रीमतीलाई उनको पतिबाट अलग हुन खोजेको आरोप मलाई नैतिक उद्देश्यको लागि आरोप जस्तो लाग्दैन। यसको उद्देश्य पुरोहितको पवित्रता जोगाउनु हो। यो एक धार्मिक र अनैतिक लक्ष्य हो। सुँगुरको मासु खान प्रतिबन्ध पनि मलाई प्रतिबन्ध जस्तो लाग्दैन जसको उद्देश्य नैतिक हो। यो सधैं भन्न सकिन्छ कि त्यहाँ एक नैतिक उद्देश्य छ जुन हामी सबैले बुझ्दैनौं। यो एक खाली कथन हो, र म त्यस्तो सोच्ने कुनै कारण देख्दिन।
मेरो तर्क थियो कि यदि mitzvos को उद्देश्य नैतिक हो, तब mitzvos अनावश्यक छन् (कम्तीमा आज)। आखिर, एक नैतिक लक्ष्य तिनीहरू बिना पनि हासिल गर्न सकिन्छ (र यसका लागि मैले नैतिक व्यक्तिहरूबाट प्रमाण ल्याएको छु जो हलाखाले बाँधिएका छैनन्)। त्यसोभए कानून राख्नुको अर्थ के हो? नैतिक र पर्याप्त हुनुहोस्।
1. तर आज म आउन सक्छु र माइमोनाइड्स र अबर्बानेल बीचको विवादको बीचमा निर्णय गर्न सक्छु र निर्धारित गर्न सक्छु कि माइमोनाइड्सको विचार बाइबलीय अध्ययनको व्याख्यात्मक उपकरणहरू अनुसार पदहरूको सरलताबाट टाढा देखिन्छ। पक्कै पनि यसको मतलब यो होइन कि म आफैंले आफैलाई जबरजस्ती गर्छु तर तपाईले हामीलाई सिकाउनु भएको छ (जसरी मैले बुझेको छु) सिंथेटिक दृष्टिकोण अनुसार सीधा तर्कबाट तर केवल बयानबाजीको प्रक्रियाबाट स्थिति परिवर्तन गर्ने कुनै चीज छैन। यसैले मलाई लाग्छ कि यो एक आधिकारिक पाठ हो भन्ने विश्वासका साथ पदहरू पढ्दा प्रक्रियाको अन्त्यमा धारणा परिवर्तनको पक्षमा निर्णय हुन सक्छ।
2. फेरि मैले बुझिन कि किन कुनै परिभाषा नभएको श्रेणी सिर्जना गर्नु मेरो तर्क भन्दा कम खाली छ कि हामीले आज्ञाहरूको सबै फाइदाहरू प्राप्त गरेका छैनौं। "धार्मिक मूल्य" ले मलाई अहिलेसम्म कुनै अर्थ राख्दैन, यसले साँच्चै प्वालहरू भरेको देखिन्छ। मिट्जभोस बिना नैतिक हुन सम्भव छ भने मिट्जभोस किन राख्ने भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा। मलाई लाग्छ कि यो उत्तर दिन सम्भव छ कि मिट्जभोस द्वारा यो अधिक नैतिक हुन सम्भव छ, वा ऋषिहरूले "मिट्जभोस भविष्यका लागि शून्य छन्" भनेका थिए। म व्यक्तिगत रूपमा सोच्छु कि साँच्चै केही मित्जभोहरूले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका जस्तै दासत्व समाप्त गरिसकेका छन् र कोही अझै पनि तिनीहरूको प्राप्तिको लागि पर्खिरहेका छन्।
1. त्यसपछि निर्णय गर्नुहोस्। प्रश्न यो छ कि यसले तपाई भन्दा फरक सोच्नेहरूलाई किन विश्वस्त गर्दैन? त्यसैले म बाइबल र हलाचाबाट धारणा र मूल्यहरू निर्माण गर्ने क्षमताको बारेमा शंकास्पद छु। तपाईलाई यो Abarbanel जस्तो देखिन्छ तर यो मलाई स्पष्ट छ कि यो किनभने तपाईं शाही हुनुहुन्न। रोयल्टीसँग कुरा गर्नुहोस् र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि तिनीहरूले संकेतहरू जारी गर्छन् र विपरीत धारणाको उदाहरण दिन्छन् (जुन तपाईंले मेरो विचारमा लेख्नु भएको विपरित ठाउँ छ)। तर राजाको प्रश्न एउटा नराम्रो उदाहरण हो, किनकि टोराहले यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउँछ। म गैर-स्पष्ट हलाखिक र वैचारिक प्रश्नहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। उही हदसम्म तपाईले मलाई पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ कि टोराहले Gd मा विश्वासको वकालत गर्दछ।
यसलाई सहज रूपमा लिनुहोस्, तथ्य यो हो कि यसले धारणामा परिवर्तनको नेतृत्व गर्दैन।
2. कुनै चीजको कुनै परिभाषा छैन भन्ने तथ्यको मतलब यो होइन कि त्यहाँ यसको बारेमा कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन (र सकारात्मकवादीको रूपमा होइन)। मुहर्रम आर. पियर्सिगका शब्दहरू उहाँको पुस्तक जेन एन्ड द आर्ट अफ मोटरसाइकल मेन्टेनेन्समा गुणस्तरको अवधारणाको परिभाषामा र (दुष्ट) ग्रीकहरूले सबै कुरालाई परिभाषित गर्नैपर्छ भन्ने तथ्यको साथ हाम्रो दिमागलाई ढकढक्याएको तथ्यमा जानिन्छ। । यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि मलाई लाग्छ कि तपाइँ निष्कर्षमा आउनुहुनेछ कि तपाइँलाई नैतिक मूल्यको अवधारणालाई कसरी परिभाषित गर्ने थाहा छैन। कुनै आधारभूत अवधारणा परिभाषित गर्न सकिँदैन। मैले तपाईलाई धार्मिक मूल्यको उदाहरण ल्याएको छु: पुजारीको पवित्रता, मन्दिरको पवित्रता र यस्तै।
तिमीले दासत्वको उदाहरण ल्यायौ, तर तिमीले आफ्नो जीवनलाई सहज बनायौ। म अधिकांश तोराह र हलचाको बारेमा कुरा गर्दैछु। तिनीहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गरेनन्, तर कहिल्यै नैतिक मूल्यवान थिएनन्। त्यसोभए तिनीहरू केका लागि हुन्? तपाईं एक सैद्धान्तिक भनाइ भन्दै हुनुहुन्छ कि mitzvos द्वारा एक अधिक नैतिक हुन सक्छ। म त्यसको कुनै संकेत देख्दिन। Mitzvos को परीक्षा मा र योजनाबद्ध (अधिकतर नैतिकता संग केहि गर्न को लागी छैन), न त वास्तविकता को अवलोकन मा। त्यसकारण मेरो विचारमा यी धेरै ह्रदयविदारक हुन् र वास्तविकताको शान्त दृष्टिकोण होइन।
29 Elul 09 - 2016/14/54 XNUMX:XNUMX बजे
मेरो जानकारी अनुसार, तपाईले राज्यको स्थापनालाई प्राकृतिक घटना (ईश्वरको हस्तक्षेप बिना) को रूपमा हेर्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने, यस सन्दर्भमा भगवानको प्रशंसा के भन्नु पर्छ?
वास्तवमा, म बुझ्छु कि आज इतिहासमा भगवानको संलग्नता छैन, राज्यको स्थापनामा मात्र होइन (र जहाँ भए पनि मलाई थाहा हुने कुनै उपाय छैन)। त्यसकारण, जब केहि खुशी हुन्छ (= "चमत्कार"?) यो संसार र मेरो सृष्टिको सृष्टिको स्वीकारको रूपमा प्रशंसा गर्ने अवसर मात्र हो।
29 Elul 09 - 2016/14/55 XNUMX:XNUMX बजे
निर्वासनमा परेका अन्यजातिहरूको शासनमा पनि हलाखामा लंगरबद्ध र मान्य भएको "दीना दमलाखुटा दिन"प्रतिको प्रतिबद्धता र आजको स्थितिमा के भिन्नता छ, सायद तपाईंले माथिको कुरा भन्न खोज्नुभएको हो, मैले बुझ्न सकिन। अतिरिक्त क्षेत्रहरू र विश्वव्यापी मूल्यहरू र जस्तै उच्च कानूनहरूको लागि मात्र नियम वैध थियो?
मैले प्रश्न बुझिन
म तपाइँको टिप्पणीहरु को एक अंश उद्धृत गर्नेछु: "एउटै कुरा को एक भाग को रूप मा, हामी यो तथ्य को अभ्यस्त भयौं कि सबै कुरा टोरा थियो र सबै कुरा गयो। हलखाह भन्दा बाहिर कुनै सामान्य मानव जीवन, र निश्चित रूपमा कुनै मूल्यहरू छैनन्। कि सबै कुरा मध्यस्थ र रब्बीहरु द्वारा संचालित र निर्धारण हुनुपर्छ। तर आज दिनचर्यामा फर्कने मौका छ। इजरायलका जनताको BH मा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय आयाम छ (BH धर्मनिरपेक्षतामा होइन तर हामी सबैको जीवनको धर्मनिरपेक्ष आयामको फिर्तीमा। केहीले यसलाई इतिहासको चरणमा हाम्रो फिर्ताको रूपमा उल्लेख गरेका छन्)। विभिन्न ऐतिहासिक रोगविज्ञानका कारण हामीले जुन ढाँचामा अभ्यस्त भइसकेका छौं, त्यसमा अडिग रहनुपर्ने कुनै कारण छैन। ” र त्यसको लागि म सोध्छु: आखिर, हलाखाह एक समयमा पनि जब "हाम्रो पापको कारणले गर्दा हामी हाम्रो भूमिबाट निर्वासित भयौं," तब पनि हामी केही नियम अन्तर्गत थियौं जसको निर्णयहरू (जसलाई हलाखा बाहिरका एरेहरूबाट पनि उत्पन्न हुन्छ) मेरो हलाखिक वैधता थियो। , जहाँ सम्म यो "दीना दमलाखुटा दिन" को श्रेणी मा समावेश गरिएको थियो, त्यसोभए विचार मा थप के आयाम महत्त्वपूर्ण छ?
आशा छ अब मैले आफैंलाई थप स्पष्ट पारेको छु।
मैले बुझें। तर अर्को जनताको शासन हाम्रो लागि कष्टप्रद र अवांछनीय छ। दिना दमलाखुटाको हलाखिक वैधता छ, त्यसो भए के हो ? के यसको मतलब फ्रान्ज जोसेफ पर्खाल मुनि बस्न राम्रो छ? खुशी यो हो कि हामी हाम्रो जीवन आफैं व्यवस्थापन गर्न फर्केका छौं र यो हलाखिक वैधता छैन।
कुरा स्पष्ट पार्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद! तपाईंले आज्ञाहरू र प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ।
29 Elul 09 - 2016/14/58 XNUMX:XNUMX बजे
यदि उपवासहरू राष्ट्रिय कार्यक्रम मात्र भएको भए के तपाईलाई लाग्छ कि तिनीहरू बाँच्ने थिए? के राज्य क्षेत्रमा आयोजित समारोहले हरेक सभाघरमा भनिएको प्रार्थनालाई साँच्चै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ?
प्रलय Tevet वा Gedaliah उपवासको दशौंमा धेरै शक्तिशाली परिमाणको घटना हो। मेरो विचारमा यसमा कुनै शङ्का छैन कि यसलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उत्तम तरिका धार्मिक शोकको दिन हो, जुन सामान्य रूपमा उपवासको दिन हो। तपाईंका (धार्मिक) परिचितहरूमध्ये कति जनाले राजा येहुलाई चिन्नुहुन्छ? र गेडलिया बेन अहिकमलाई कति जनाले चिन्नुहुन्छ?
के गर्ने? यहूदीहरूले खानासँग सम्बन्धित चीजहरू राम्ररी सम्झन्छन्, चाहे त्यो छुट्टी होस् वा उपवास होस्। इतिहासले देखाएको छ कि यसले धेरै राम्रो काम गर्दछ। र हलाचामा स्वीकृत मितिहरू बाहेक अन्य कुनै पनि यहूदी राष्ट्रिय बिदाहरू (मेगिलाट तानित) बाँचेनन् भन्ने प्रमाण।
यो एक साधन दाबी हो। म हलाखालाई यस्तो सम्झनाको दिन सेट गर्न आवश्यक छ वा अपेक्षा गर्दछ भन्ने प्रश्नको सामना गर्छु। के बढी प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न फरक छ र छुट्टै छलफल गर्नुपर्छ।
दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा, मेरो विचार छ कि यदि तिनीहरूले बिर्सन्छन् - तिनीहरूले बिर्सनेछन्। केहि बिन्दुमा घटनाहरू टाढा र कम सान्दर्भिक हुन्छन् (मलाई आज गेडल्याह र येहूलाई सम्झनु साँच्चै महत्त्वपूर्ण लाग्दैन)। तपाईंको टिप्पणीहरू धर्म र हलखाहले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी मानवीय मूल्यहरूको सेवा प्रदान गर्ने हो भन्ने व्यापक धारणामा आधारित छन्। म यसमा सहमत छैन।
29 Elul 09 - 2016/15/01 XNUMX:XNUMX बजे
रब्बी उरिएल एइटमका साथीहरूबाट यरुहममा तपाईंको शिक्षा दिनदेखि मैले तपाईंको बारेमा धेरै कुराहरू सुनेको छु।
म प्रलय दिवसको लागि उपवास सेट गर्ने बारे तपाईंको लेख उत्सुकतापूर्वक पढ्छु, म धेरै कुराहरूसँग सहमत छु।
मैले स्वर्गीय रब्बी अमितलबाट धेरै पटक सुनेको छु: "सबै कुरा टोरा राय होइन।" "दाआत टोराको बारेमा सबै कुरा भन्न आवश्यक छैन" र थप
स्वतन्त्रता दिवसमा प्रशंसाको सन्दर्भमा तपाईंको शब्दहरूमा रमाईलो गर्नुहोस्।
एउटा चमत्कारको प्रशंसा गरेर त्यसको कुनै धार्मिक महत्व छैन भनी कसरी भन्न सकिन्छ? वा मैले तिमीले भनेको कुरा बुझिन।
म एक व्याख्या मनपर्छ।
बाथरुममा गएपछि (भेद गर्न) सिर्जना गरेको कथन बारे सोच्नुहोस्। के परमेश्वरले मेरो प्वालहरू खोलिदिनुभएको स्वीकारोक्तिको धार्मिक आयाम छ? के मैले अघि र पछि अभिवादन गरेको बिहानको खाजाको धार्मिक आयाम छ? मेरो लागि देश शौचालय वा बिहानको खाजा जस्तै हो।
चमत्कारको लागि प्रशंसाको लागि, त्यो अर्को प्रश्न हो। मेरो धारणा छ कि आज कुनै चमत्कारहरू छैनन् (वा कम्तिमा त्यहाँ कुनै संकेत छैन) र संसारमा भगवानको कुनै संलग्नता छैन। जब हामीमा खुशीका घटनाहरू हुन्छन्, जस्तै राज्यको स्थापना, यो संसार र हाम्रो आफ्नै सृष्टिको लागि भगवानलाई धन्यवाद दिनको लागि ट्रिगर हो। तर म त्यसलाई गाजा (?) मा हालको धर्मशास्त्रको बारेमा लेखिरहेको पुस्तकमा विस्तार गर्नेछु।
तर के हामी स्वतन्त्रता दिवसको खातिर आफ्नो आशीर्वाद सच्याउने अधिकार छ?
यो छलफल हुनुपर्छ। कम्तिमा केही विधिहरू (मेरी) को लागि मुक्ति र स्वीकारको हरेक चमत्कारमा प्रशंसा भन्न वैध छ, र त्यसपछि यस्तो देखिन्छ कि एक विशेष नियम बिना पनि आशीर्वाद दिनुपर्छ। हरेक पटक खाँदा स्याउ खाँदा आशीर्वाद र हरेक स्याउमा आशीर्वाद नराख्नु जस्तै।
कुनै पनि अवस्थामा, आशिष् बिना प्रशंसाको कुनै सीमा छैन।
र त्यहाँ सबराको लागि ठूलो ठाउँ हो कि आशीर्वादको साथ पनि कुनै सीमा छैन। यदि इजरायलले चानुकाको चमत्कार पछि ऋषिमुनिहरूको नियमविना आफैंबाट आशीर्वादमा हलेल भन्ने हो भने, र त्यसमा समस्या थियो? केही पहिलेको पनि एउटा चलन छ, र यस विषयमा प्रशंसाको वरदानको चर्चा छ। तर त्यसमा म संकोच गर्छु, आदि।
मलाई इजरायल राज्यलाई "सेवा" को रूपमा हेर्न गाह्रो छ।
इजरायलका मानिसहरू 2000 वर्ष पछि इजरायल फर्के। विडम्बना २० वर्ष पहिले राज्य स्थापना भएको थिएन।
राज्यलाई धन्यवाद पोस्टकार्डहरूको समूह छ। स्वतन्त्र सरकार इजरायलका जनतामा फर्कियो। ऋषिहरूमा अभिव्यक्तिहरूलाई "मसीहका दिनहरू" भनिन्छ।
प्रशंसा चमत्कारको लागि मात्र होइन तर मुक्तिको लागि हो
चमत्कार को मामला मा।
चमत्कार भनेको प्रकृतिको नियम तोड्नु मात्र होइन इतिहास वा तर्कको नियम तोड्नु हो।
पृथ्वीको छेउछाउमा छरिएका मानिसहरू २००० वर्षपछि आफ्नो भूमिमा फर्किने घटनालाई हामीले अरू कहाँ औंल्याएका छौं?
उसलाई मिलाउछ। विकासकर्ता। त्यसमा पोस्टकार्डहरूको समूह बनाइएको थियो। अरु के उदाहरण छ?
के अगमवक्ताहरूले आफ्नो दर्शनमा यो चाहँदैनन् र?
आखिर, यदि 80 वर्ष पहिले तिनीहरूले मोरक्कोबाट मोर्देचाई र पोल्याण्डबाट लिबिसलाई उनीहरू हुन् भनेर बताउँथे। तिनीहरूका छोराहरू र नातिहरू इजरायलका मानिसहरूको शासनमा इजरायलको भूमिमा सँगै हुनेछन् र सँगै परिवारहरू स्थापना गर्नेछन्। के तिनीहरूले यो शौचालय जस्तै हो भनेर भन्नुहुन्छ?
म छक्क परें।
जब मैले इजरायल राज्यलाई सेवाहरूसँग तुलना गरें, मेरो मतलब यो होइन कि राज्य सेवाहरू जस्तै बेकार वा घृणित छ। मैले भन्न खोजेको हो कि राज्य हाम्रो लागि (महत्वपूर्ण) साधन हो, र अरू केही होइन। म धेरै खुसी छु कि यो साधन हाम्रो अधिकारमा छ, र वास्तवमा धेरै वर्षहरू भएको छैन, र अझै पनि म यसलाई धार्मिक मूल्यको रूपमा देख्दिन। यो प्रायः राष्ट्रिय मूल्य हो। वास्तवमा मसीहको आगमन पनि वर्षा दिने जस्तै प्रतिज्ञा हो। मसीहको दिनहरूमा पनि कुनै धार्मिक मूल्य छैन किनकि त्यहाँ मिट्जभोसको कुनै पालना छैन, तर धेरै जसो माध्यमले हामीलाई थप मिटभोस (मन्दिर, आदि) अवलोकन गर्न अनुमति दिनेछ। धनी हुनु भनेको आज्ञाहरू पालन गर्ने माध्यम पनि हो, र यसले धार्मिक मूल्यको सम्पत्ति बनाउँदैन। राज्य अनिवार्य रूपमा एक साधन हो, र यो तथ्य हामीलाई लामो समयदेखि अभाव भएको छ र हामीले यसलाई चाहेको र त्यस बिना दुःख भोग्नु हाम्रो लागि धेरै भ्रमित छ (जस्तै गरिब मानिस जसले आफ्नो संकटको कारण पैसालाई मूल्यको रूपमा देख्छ) ।
चमत्कार को लागी एक धेरै आकर्षक भ्रम छ। संसारमा भगवानको हरेक हस्तक्षेप एक चमत्कार हो। हस्तक्षेप भनेको कुनै पनि हस्तक्षेप बिना (प्रकृतिको नियम अनुसार) हुनै पर्ने थियो र भगवानले हस्तक्षेप गर्नुभयो र अरू केहि भयो। यसको अर्थ प्रकृतिको नियमको उल्लङ्घन हो। अर्थात् चमत्कार । प्रकृतिमा कुनै ईश्वरीय हस्तक्षेप छैन जुन चमत्कार होइन।
हाम्रो इजरायल फिर्ताको विशिष्टता मलाई राम्ररी थाहा छ र म यसमा सहमत छु। यसको मतलब यहाँ कुनै चमत्कार थियो? मेरो आँखामा ठूलो शंका। यो एक असामान्य ऐतिहासिक घटना हो।
मैले फरक बुझिन । परमेश्वरले अगमवक्ता पठाउनुहुनेछ वा पानी पर्नेछ भन्नुभयो। हामीले मिट्जभोट गर्यौं, तपाई कहिले पानी नपर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ? एक हप्ता पछि? एक महिना? पुस्ता? Mitzvot गर्ने कि नगर्ने भनेर कसरी निर्णय गर्ने? कति आज्ञा पालन गर्नुपर्छ? केही मानिसहरू? यहाँ सबै कुरा वास्तवमा अस्वीकार्य छैन। यो सामान्य धारणाको प्रश्न हो, खण्डनको होइन। जसरी मैले लेखेको छु, भगवानले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने मेरो निष्कर्ष कुनै स्पष्ट खण्डनको परिणाम होइन तर छापको परिणाम हो।
मैले अब बुझेको छु कि तपाईले "धार्मिक" भनेको के हो र यसैले म इजरायल राज्यको लागि शब्द बुझ्छु र यसको स्थापनाको कुनै धार्मिक अर्थ छैन, म "धार्मिक" शब्दको फराकिलो अर्थ देख्छु र त्यसैले किबुट्ज गालुयोट आदिको नजरमा यो। ठूलो धार्मिक अर्थ छ।
मसीहको दिनको लागि पनि यही कुरा जान्छ, र म यहाँ मसीहको आगमनको लागि मन्दिर हुनेछ भनेर स्पष्ट छ कि छैन भन्ने मुद्दामा प्रवेश गर्दिन, यो बिल्कुल सरल छैन।
चमत्कारहरूको लागि, म "भोलि सूर्य उदाउनेछ" भन्ने विचार साझा गर्छु - यो चमत्कार होइन। प्रकृतिको नियमको अनुभूति कुनै चमत्कार होइन।
म पूर्ण रूपमा यो स्थिति साझा गर्दछु कि सबै कुरा चमत्कार होइन, जस्तै केहि मानिसहरू भन्न चाहन्छन्।
तर निर्वासितहरूलाई समूहबद्ध गर्नु र दुई हजार वर्षपछि इजरायल फर्कनु, अन्य मानिसहरूमाझ समान नहुने घटना प्राकृतिक घटना होइन।
यो साँचो हो कि यहाँ समुद्र पार गर्न वा "गिभोन डोममा सूर्य" छैन, तर यहाँ एक घटना छ जुन प्राकृतिक छैन, यसको प्रकार र विधामा अद्वितीय छ। यस बिन्दुमा पनि स्पष्ट रूपमा हामी सहमत छैनौं।
दुईवटा तर्कहरू विभाजित गर्न आवश्यक छ: 1. राज्यको स्थापना र निर्वासितहरूको समूह एक चमत्कार थियो। २. यी दुईको धार्मिक महत्व छ। दुबै दिशामा निर्भरता छैन। त्यहाँ कुनै धार्मिक महत्व नभएको चमत्कार हुन सक्छ (जस्तै यो चमत्कार हो भन्ने सोच्नेहरूका लागि प्वाल खोल्नु), र पक्कै पनि त्यहाँ धार्मिक अर्थ हुन सक्छ र यो चमत्कार होइन। म तर्क गर्छु कि त्यहाँ कुनै संकेत छैन कि यो चमत्कार हो (विसंगतिहरू चमत्कार होइन), र यो पनि कि त्यहाँ कुनै धार्मिक महत्व छैन (म एक धर्मनिरपेक्ष जियोनिस्ट हुँ)। उल्लेख गरिए अनुसार, यी दुई दावीहरू मध्ये कुनैमा छुट्टाछुट्टै वा दुवै सँगै असहमत हुन सम्भव छ।
यसबाहेक, यो धेरै सम्भव छ कि यो देश हाम्रो मुक्तिको विकास (इन्शाअल्लाह) बन्नेछ, र त्यहाँ मन्दिर निर्माण हुनेछ र त्यसबाट मुक्ति आउनेछ। तर मेरो नजरमा यसको कुनै धार्मिक महत्व छैन। यो धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य र धर्मनिरपेक्ष प्रेरणाको लागि बनाइएको एक धर्मनिरपेक्ष प्लेटफर्म हो। यस्ता कार्यको कुनै धार्मिक महत्व हुँदैन ।
त्यो हो, धार्मिक अर्थ, तपाईको विचारमा, धार्मिक अभिप्राय चाहिन्छ?
मानिसको कार्यको धार्मिक महत्व हुन्छ यदि यो धार्मिक अभिप्रायले गरिन्छ (A.A. Leibowitz)। यद्यपि mitzvos लाई इरादा चाहिदैन तर यो केवल mitzvos मा छ (किनकि एक अनियमित नाम को रूप मा सन्दर्भ को sabra)। र विशेष गरी मैले लेखमा प्रमाणित गरें (दिउँसो, अपराधमा धर्मनिरपेक्ष असफलता) कि आज्ञाहरूको सबै विचारहरूलाई विश्वास चाहिन्छ। स्वर्गको लागि र मिट्ज्वा (इजरायलको बसोबास) को लागि नगरिएको दलदल सुकाउनुको कुनै धार्मिक मूल्य छैन। यसको राष्ट्रिय मूल्य छ।
यो अवश्य पनि आवश्यक अवस्था मात्र हो तर पर्याप्त छैन। कार्यको आफैमा धार्मिक मूल्य हुनुपर्छ, र केवल टोराले यसलाई परिभाषित गर्दछ। धार्मिक कारणले एक खुट्टामा उभिने व्यक्तिको मन दुखेको छ, त्यसको कुनै धार्मिक मूल्य हुँदैन।
पेन्टाटेचको मोआनमा माइमोनाइड्सले "आफ्नो हातमा" गर्ने व्यक्ति र नियत र उद्देश्यका साथ गर्ने व्यक्ति बीचको भिन्नता देखाउँदछ।
यो स्पष्ट छ कि उच्च स्तर के हो।
प्रश्न यो छ कि कुनै व्यक्तिले नियतविना गरेको कुनै पनि कार्यलाई हामीले गैर-धार्मिक भनेर परिभाषित गर्ने हो? म एक सिद्धान्तको रूपमा सहमत छु तर यो इजरायलका धेरैका लागि अनिवार्य अध्ययन हो, त्यहाँ अझै पनि केही छन् जसले कामको लागि सुविधा र मानहरू "यसको खातिर होइन"…
ओखमको रेजरमा मेरो लेखमा मैले व्याख्या गरें कि विश्वास बाहिर नगर्नु भनेको आफ्नै लागि गर्नु होइन। यो कुनै धार्मिक अभ्यास होइन। राजाहरूबाट रामबम सुफच हेर्नुहोस्। जो विश्वास गर्छ र जानाजानी गर्दैन, यहाँ एकले mitzvos र mitzva को रूपमा परिभाषित नगरिएको बीच विभाजन गर्नुपर्छ। सही सिक्नु एक सुन्दर कुरा हो, तर यो सत्य स्पष्ट गर्न को लागी एक उपकरण होइन। र उनले टिप्पणीकारहरू (रामबाम र रब्बेइनु योनाह र अन्य) मा मिश्नाह इन द एवोट (होय दान दायाँ तर्फ सम्पूर्ण व्यक्ति) को बारेमा देखे कि उनीहरूले लेखेका थिए कि यहाँ मात्र चर्चा गरिएको छ कि यो तर्कसंगत छ, लोकप्रिय रायको विपरीत। र मैले ओखमको रेजरमा मेरो BDD लेखहरूमा यसको बारेमा लेखेको छु।
यदि रब्बीले "धार्मिक मूल्य" भन्दै आफ्नो अर्थ के हो भनेर निर्दिष्ट गर्न सक्छ। त्यो हो, एक धार्मिक मूल्य हो केवल मित्ज्वाहको पालना (एक परिभाषा जुन रब्बी द्वारा माफ गरिएको छ किनभने मैले बुझेको छु कि उसले यो मन पराउँदैन, Leibowitzian), के यो केहि चीज हो जसले mitzvah को पालना गर्न मद्दत गर्दछ। जागरूकता, र त्यो भन्दा पर: यदि छैन भने एक धार्मिक मूल्य हो।
धन्यवाद, र माफ गर्नुहोस् यदि मैले रब्बीलाई हृदयबाट पुरानो र बिर्सिएका छलफलहरूमा ल्याएको छु।
ठूलो शान्ति। धार्मिक मूल्य भनेको ईश्वरको कामको मूल्य हो। धार्मिक मूल्य भनेको आज्ञा मात्र होइन किनकि परमेश्वरको उपासना व्यवस्थाभन्दा फराकिलो छ। शुल्चन अरुच भन्दा पहिले पनि यसको धार्मिक महत्व छ। निस्सन्देह, शर्त पनि आवश्यक छ कि यो भगवानको कामको लागि गर्नु पर्छ।
मेरो विचारमा राज्यको कुनै पनि अर्थमा धार्मिक मूल्य छैन। राज्य मेरो/हाम्रो आवश्यकता हो मूल्य होइन। म मेरा मानिसहरू र इजरायलको भूमिमा बस्न चाहन्छु जुन हाम्रो ऐतिहासिक लत हो। त्यो हो।
हलाखाद्वारा शासित राज्यको सन्दर्भमा यसको मूल्य के हो भनेर छलफल गर्नुपर्छ (किनकि राज्य कहिल्यै नागरिकका लागि साधन मात्र होइन), तर हाम्रो जस्तो राज्यको कुनै धार्मिक मूल्य हुँदैन।
NFM को लागी, मलाई थाहा छैन तपाईले कुन NFM खोज्दै हुनुहुन्छ (महिलाको पवित्रता बाहेक)। यी दुई पूर्णतया फरक चीजहरू हुन्: यो एक आवश्यकता हो र यो एक मूल्य हो। यदि केहि राम्रो वा राम्रो छ भने के हुन्छ? यी दुई फरक कुरा मात्र हुन् ।
मैले भन्न खोजेको हो, तपाईंले राखेको परिभाषाभन्दा धार्मिक मूल्यको अर्थ के हो ? एक मिट्ज्वा, वा धार्मिक मूल्य बीचको भिन्नता के हुनुपर्दछ, र यसको अस्तित्वमा मलाई के मद्दत गर्दछ? वा मैले रब्बीका शब्दहरू बुझिन र यो पनि एक बाँझो प्रश्न हो, किनकि यस अवधारणाको यसको परिभाषा भन्दा बाहिरको कुनै अर्थ छैन? मलाई लाग्छ कि राम्रो र सुन्दर बीचको भिन्नता शब्दमा नभए पनि, र ती बीचको NPM को व्याख्या गर्न सम्भव छ। (जस्तै: मलाई लाग्दैन कि मैले सुन्दरताको लागि आफ्नो जीवन दिने व्यक्ति भेट्टाउनेछु, जबकि राम्रोको लागि हो, कम्तिमा मेरो विचारमा, सुन्दरताको पर्याप्त महत्त्वपूर्ण अर्थ छैन भन्ने तथ्यको कारणले)।
पोस्ट स्क्रिप्टम। तपाईंले राज्यलाई राष्ट्रिय मूल्यको कुराको रूपमा मात्र बुझ्नुहुन्छ (जस्तै मैले बुझेको छु) र मिट्जभोस राख्न मद्दत गर्ने रूपमा होइन। (यद्यपि तपाइँले आज्ञाहरू पालन गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने कुरालाई धार्मिक मूल्य मान्न आवश्यक छैन।) तपाइँको विधि अनुसार साँच्चै प्रशंसा किन भन्नुहुन्छ? संसारको सृष्टिको बारेमा स्वीकारोक्तिको लागि ट्रिगर मैले तलब वृद्धि पाए वा ह्यारी पोटरको अर्को पुस्तक बाहिर आएको भए पनि हुन सक्छ, तर कुनै पनि सामान्य व्यक्तिले यसको लागि प्रशंसा गर्दैनन्। यदि राज्यसँग साँच्चै राष्ट्रिय मूल्य मात्र छ, र भगवानको पूजा गर्ने प्रणालीमा कुनै प्रक्षेपण छैन भने, म तपाईंको ठाउँमा यसलाई प्रशंसा गर्न राम्रो ट्रिगर मान्न सक्दिन। रब्बीले आफ्नो विचार के हो र कहाँ सीमा पार गर्छ भनेर व्याख्या गर्न सक्षम हुनेछ?
धन्यवाद, माफ गर्नुहोस् र नयाँ वर्षको शुभकामना।
यस्तो अन्तरालमा छलफल गर्न मलाई गाह्रो छ।
मिट्ज्वाको युगमा धार्मिक मूल्यको कुनै पनि कुरा आउँदैन। यसको विपरित, एक मिट्ज्वा धार्मिक मूल्यको केहि उदाहरण हो। तर नैतिक अभ्यासमा पनि मूल्य र धार्मिक महत्त्व छ (शुतुरमुर्ग किनभने यो ईश्वरको इच्छाको पूर्ति हो)। यसको विपरित, अज्ञानताको आवश्यकता पूरा गर्नुको कुनै नैतिक वा धार्मिक मूल्य हुँदैन। एक व्यक्तिलाई देश चाहिन्छ जसरी उसले बिहानको खाजा वा घर चाहन्छ। यो आवश्यकताको पूर्ति हो, मूल्य होइन। जब तपाईंको जीवनमा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूरा हुन्छ (जस्तै तपाईंको जीवन बचाउनु) यो प्रशंसा भन्नको लागि ठूलो कारण हो। यहाँ नबुझेको र के बुझाउन आवश्यक छ त्यो मैले देखेको छैन।
के राज्यले धार्मिक मूल्य मान्यता पालन गर्न दिन्छ? हुनसक्छ। तर ब्रेकफास्ट र तलबले पनि अनुमति दिन्छ।
29 Elul 09 - 2016/15/03 XNUMX:XNUMX बजे
माथिको छलफललाई पछ्याउँदै म लेख र यस वरपर घुमेको छलफलबाट मेरो विचारमा सोधिएका धेरै प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु।
ए। जहाँसम्म मैले बुझेको छु, महामहिमले सृष्टिकर्ताको हस्तक्षेप र "चमत्कारहरू" को सृजनाको अर्थमा इजरायल राज्य, निर्वासनहरू समूहबद्ध गर्ने, इत्यादिको सृजनामा ​​विश्वास गर्दैनन्, विशेष गरी जबदेखि साना "चमत्कारहरू" "हो"। "पैसा" जस्तो व्यक्तिलाई अप्रत्याशित ठाउँबाट खस्यो
मैले सोधें, [तपाईले धेरै प्रस्तुत गर्ने विषय अनुसार], विकासवादको सन्दर्भमा तपाईले लेख्नुभयो कि नास्तिकहरूले कानून भित्र विकासलाई हेर्छन् जब तपाइँ एकै ठाउँमा उभिनुहुन्छ र बाहिरका कानूनहरू हेर्नुहुन्छ र 'यी कानूनहरू कसले बनायो' भनेर सोध्छन्, र जब तपाइँ त्यो कानून देख्नुहुन्छ। यसरी बनाइएको हो यसले सृष्टिमा लैजान्छ, तपाईं निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ कि परमेश्वरले यस तरिकाले कानून बनाउनुभयो, अर्थात्, परमेश्वरले 'विकासको नियम' सृष्टि गर्नुभयो। यदि त्यसो हो भने, चमत्कारहरूको सन्दर्भमा पनि, यो सत्य हो कि 'तहको' र सरल दृष्टिकोणले हामीलाई सबै कुरा प्राकृतिक हो जस्तो देखिन्छ, र इजरायलका मानिसहरूको पुस्तासम्मको पाठ्यक्रममा प्राकृतिक व्याख्याहरू छन्, जस्तै कि स्थापना। इजरायल राज्य, तर यदि हामीले बाहिर हेर्नुभयो र अगमवक्ताहरू र टोराहले के भविष्यवाणी गरे जस्तै सोध्नुहोस्, सायद हामी भन्न सक्छौं कि सृष्टिकर्ताले यो सम्पूर्ण 'प्राकृतिक' प्रक्रियालाई उद्देश्यका साथ योजना बनाउनुभयो र निर्देशित गर्नुभयो, र प्रक्रिया बाहिर र प्राकृतिक नियमहरू भित्र हेर्दै। यो, प्रोविडेन्स को तस्वीर दिन सक्नुहुन्छ? [साना चमत्कारको सन्दर्भमा पनि यो दृष्टिकोण अपनाउन सकिन्छ]।
बि. अर्को प्रश्न, के यसको मतलब यो हो कि तपाईं टोरा र अगमवक्तामा लेखिएका चमत्कारहरूमा विश्वास गर्नुहुन्न, र तिनीहरू भौतिक विज्ञानका नियमहरूलाई अस्वीकार गर्ने रूपमा सतही नजरमा देखिन्छन्: एक लाठी जो सर्प बन्छ, रोटी जुन स्वर्गबाट ​​झर्छ। , रगतमा परिणत हुने पानी, स्वर्गीय आँधीबेहरीमा घोडाहरू सहितको रथ, किंवदन्तीहरूको संग्रहको रूपमा?
तेस्रो। थप रूपमा, यसले मानवीय कार्यहरूको बारेमा परमेश्वरलाई जान्नमा तपाईंको विश्वासको बारेमा के भन्छ, सतही रूपमा यस्तो देखिन्छ कि पर्यवेक्षणको कमीले परमेश्वरलाई चिन्न अस्वीकार गर्दैन, तर यस्तो देखिन्छ कि यी विश्वासहरूको एकअर्कामा गहिरो प्रभावहरू छन्, आदि। तपाईंको विधिको लागि 'पुरस्कार र दण्ड' को अवधारणा अवस्थित छैन, र त्यसैले तपाईंको शब्दको अर्थ 'अर्को संसार' एक ऋषि विश्वास हो जसको टोरामा कुनै समर्थन छैन। स्पष्ट समर्थन], यस सिद्धान्तमा अविश्वास, लेइबोविट्जका शब्दहरू दोहोर्याउनु हो, कि मिट्ज्वालाई सबै 'चार्ज' भनेको मैले त्यसो गर्न थालेकोले मात्र हो, के यसको मतलब तपाईलाई हो? यदि त्यसो हो भने मलाई आशा छ कि तपाईलाई यो स्पष्ट छ कि धेरैले यस धर्ममा सामेल हुन हिचकिचाउँदैनन्, किन आफैलाई पुरानो र पुरानो कानूनको प्रणालीमा राख्नुहुन्छ [तपाईं पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ कि धेरै आदेश र मिट्जभोहरूले युग र युगको लागि आफ्नो स्वादलाई खारेज गर्दछ] किन होइन। स्वीकार गर्नुहोस्' कानूनको त्यो प्रणालीको अंश मात्र, तपाईं मात्र सान्दर्भिक, इजरायल राज्यको कानूनमा के गलत छ? किन विद्यमान व्यवस्थालाई धेरै बोझ?
D. तपाईंले भनेको कुराबाट यो सुनिन्छ कि तपाईं 'स्वर्गबाट ​​टोरा' को अवधारणामा विश्वास गर्नुहुन्छ [एक निश्चित सीमा भित्र तपाईंले बाइबलका आलोचकहरूको दाबीहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर बुझेको छु], र अन्यथा तपाईंले यसको अवधारणामा विश्वास गर्नुपर्छ। 'भविष्यवाणी'। र मैले सोधेँ, किन यहाँ पनि त्यही तर्क प्रयोग गर्नुहुन्न [यसले मेरो विचारमा भन्नु पनि अर्थपूर्ण छ], कि मैले नदेखेको सबै कुरा अस्तित्वमा छ भनी अनुमान गर्ने कुनै कारण छैन, अर्थात् झण्डै २५०० वर्षदेखि कसैले देखेको छैन। एक भविष्यवाणी यो के हो र यो कसरी देखाउनुपर्छ, र तपाइँ एक पटक अवस्थित गैर-गम्भीर भविष्यवाणीहरूको आधारमा विश्वास गर्नुहुन्छ [विगतमा भविष्यवाणी यस पाठ्यक्रममा थियो: राम्रो गर्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस्, नराम्रो गर्नुहोस्, पछि आएका सबै प्रक्रियाहरूले गर्छन्। प्रकृतिको मार्गबाट ​​विचलित हुनुहुन्न], त्यसोभए किन केवल भविष्यवाणी भन्ने कुरा छैन र यो पुरातन संसारमा मानिसहरूको कल्पना हो र आज यो अस्तित्वमा छैन भनेर विगतमा यो अवस्थित थिएन, र हामी जस्तै। एक पटक कल्पना गरे कि त्यहाँ आत्माहरू र दानवहरू र मन्त्रहरू र राशि चिन्हहरू र अन्य सुन्दर कथाहरू छन्, कल्पना गर्नुहोस् त्यहाँ एक भविष्यवाणी छ, मूलतया म तपाईंका शब्दहरूमा तपाईंको दावीहरू दाबी गर्छु, मसँग भविष्यवाणीमा विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन यदि a। म आज यो अवस्थित देख्दिन। बि. म प्रकृतिद्वारा सबै भविष्यवाणीहरू व्याख्या गर्न सक्छु। तेस्रो। मसँग विश्वास गर्ने उचित आधार छ कि कुनै समय मानिसहरूमा राम्रो भेद थिएन र तिनीहरूले भविष्यवाणी गरे वा कल्पना गरे भनेर आविष्कार गरे।
ए। पहिलो, मलाई थाहा छैन मेरो सम्मानले के विश्वास गर्छ वा मान्दैन, म के विश्वास गर्छु (वा नगर्ने) भन्दा नजिक छु। जहाँसम्म म विश्वास गर्छु, साँच्चै मसँग हाम्रो संसारमा कुनै चमत्कार भइरहेको छ भन्ने कुनै संकेत छैन। सायद त्यहाँ केही छन् तर म तिनीहरूलाई देख्न सक्दिन। यो विकासको बारेमा मेरो तर्कसँग मिल्दोजुल्दो छैन किनकि त्यहाँ एउटा तर्क छ जसले निर्देशित हात (सृष्टिकर्ता) को अस्तित्वलाई बल पुर्‍याउँछ, जबकि यहाँ यो केवल एक सम्भावना हो।
त्यसभन्दा बाहिर, चमत्कारलाई संसारमा परमेश्वरको हस्तक्षेपको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, अर्थात्, यसको सामान्य मार्गबाट ​​आएको परिवर्तन। Hoy भन्छन् कि कानून अनुसार चाल X हुनु पर्ने थियो र भगवानले यसलाई Y मा परिवर्तन गर्नुभयो। जबसम्म मसँग के भइरहेको छ भन्ने स्वाभाविक स्पष्टीकरण छ, त्यहाँ हस्तक्षेप छ भनेर किन मान्नुपर्छ भन्ने म देख्दिनँ। र यदि यो प्राकृतिक आचरण उत्पन्न गर्ने कोही हो भने, म यसको बारेमा कुरा गर्दैछु। यो कानूनको निर्माण हो।
बि. मेरा पुस्तकहरूमा म विभिन्न स्रोतहरूमा अलौकिक विवरणहरूको सन्दर्भमा मेरो सन्दर्भको विवरण दिनेछु। सामान्यतया, यो धेरै सम्भव छ कि विगतमा परमेश्वरले अधिक हस्तक्षेप गर्नुभयो (त्यसपछि त्यहाँ चमत्कारहरू थिए र त्यहाँ भविष्यवाणी थियो)। आज म भगवानको त्यस्तो संलग्नताको कुनै संकेत देख्दिन।
तेस्रो। मैले यहाँ बुझिन। पर्यवेक्षणको अभावमा संलग्नताको कमीको बारेमा के हो? त्यहाँ मानव कार्यहरूको निष्क्रिय निरीक्षण छ तर कुनै हस्तक्षेप छैन (कम्तिमा बारम्बार होइन)।
टोराह र मिट्ज्वा प्रति प्रतिबद्धता इनाम र दण्डमा होइन तर Gd ले आज्ञा गरेको काम गर्ने कर्तव्यमा छ। माइमोनाइड्सले कामदारहरूको इनामको आशा र सजायको डरबारे आफ्नो टिप्पणीमा पहिले नै लेखेका छन्। सायद यही कारणले UAV को बारेमा यी विश्वासहरू सिर्जना गरिएको थियो। र सायद तिनीहरू वास्तविक हुन्, तर मलाई थाहा छैन।
मूल्याङ्कन को प्रश्न, को सामेल हुनेछ र को छैन, सत्य को मुद्दा मा अप्रासंगिक छ। म सहि छु र म लोकप्रिय हुनेछु कि छैन भन्ने प्रश्न हो। म पवित्र झूटको विरोध गर्छु (भगवानको काममा धेरै मानिसहरू जोड्नको लागि झूट बोल्दै)। माइमोनाइड्सको हात्तीको दृष्टान्तको कारणले मात्र हो। काममा सामेल हुनेहरूले गल्तीको आधारमा त्यसो गर्छन्, त्यसैले तिनीहरू गलत भगवानको लागि काम गर्छन्, र तिनीहरूको सामेल हुनुको कुनै मूल्य हुँदैन।
इजरायल राज्यको कानुनसँग के सम्बन्ध छ? र कि तिनीहरूलाई पालन गर्ने आफ्नो धार्मिक कर्तव्यबाट बाहिर जान्छ? फिफा (फुटबल संघ) को नियमबारे किन बोल्नुभएन ?
D. यो पनि मेरो पुस्तकमा व्याख्या गरिनेछ। यी मध्ये केही सत्य र अस्थिर पुस्तकहरूमा पनि चर्चा गरिएको छ (एक दिनको साक्षी तर्कमा)। यहाँ म संक्षिप्त व्याख्या गर्नेछु। प्रकृतिको नियम सँधै एउटै ढंगले चल्ने भए पनि मानिसमा परिवर्तन हुन्छ । अनि एक पटक के सोचेका थिए आज के सोच्छन् ? र तिनीहरूले आज के गरे? उनीहरूले आज के लगाएका थिए? त्यसोभए परमेश्‍वरको आचरण परिवर्तन हुँदैन भनी तपाईं किन मान्नुहुन्छ? यदि मैले निर्णय गर्नुपर्‍यो भने म यसलाई मानिससँग तुलना गर्छु र निर्जीव प्रकृतिसँग होइन। उसले सधैं एउटै व्यवहार गर्छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यसैले यदि उसले बिस्तारै संसार छोड्ने निर्णय गरेको छ भने, म यसलाई अनौठो वा बुझ्न नसकिने कुरा देख्दिन। यसको विपरित, यो किन भइरहेको छ भनेर मसँग एक परिकल्पना पनि छ। एउटा बच्चा जस्तै जो हुर्किएपछि उसको बुबाले उसलाई झन् एक्लै छोडेर स्वतन्त्र रूपमा दौडन्छ। हामीप्रति परमेश्वरको मनोवृत्ति पनि त्यस्तै छ। उहाँको विदाई भनेको पुस्ताको पतन होइन, जसरी हामी परिचित छौं, तर पुस्ताको उदय (परिपक्वता) हो। आज हामी पहिले नै चमत्कार बिना राजधानी को लागी एक नेता छ भनेर बुझ्न सक्छौं। हामी दार्शनिक रूपमा यो बुझ्नको लागि पर्याप्त कुशल छौं कि निश्चित नियमहरूद्वारा शासित संसारले मनमोहक संसार भन्दा धेरै सृष्टिकर्तालाई गवाही दिन्छ। त्यसैले अब तपाईलाई चमत्कारको आवश्यकता छैन। कमसेकम यदि हामी वयस्कहरू जस्तै व्यवहार र सोचिरहेका थियौं भने, हामीबाट अपेक्षा गरेजस्तै। साँच्चै बाल्यमान सोच भएका अरूहरू पनि छन्, तर तिनीहरूबाट सम्भवतः हुर्कने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रतिक्रिया पछ्याउँदै, तपाईंले भन्नुभयो कि "यो पक्कै पनि सम्भव छ कि विगतमा भगवानले थप हस्तक्षेप गरे।" तर टोरामा त्यहाँ पुस्ताहरूका लागि हस्तक्षेपको कुरा गर्ने पदहरू छन् (र मैले तपाईंको भूमिमा ठीक समयमा वर्षा दिएँ, र मैले तपाईंको समय समयमा वर्षा दिएँ, आदि)। यो कसरी भन्न सकिन्छ कि भगवान (जसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थियो कि उसले कुनै बिन्दुमा सम्पर्क काट्न जाँदैछ) "पुरस्कार" को प्रतिज्ञा लेख्यो जुन कुनै बिन्दुमा उहाँले पूरा गर्न रोक्न चाहनु भएको थियो? आखिर, यदि आमाबाबुले राम्रो व्यवहारको सट्टामा आफ्नो बच्चालाई मिठाईको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने, बच्चा हुर्किए पनि, आमाबाबुले आफ्नो वाचा पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, हैन? र यदि उसले सेक्स गर्न बन्द गर्न चाहन्छ भने, कम्तिमा उसले किन (हामी हुर्क्यौं, आदि) व्याख्या गर्नुपर्छ।
टोरामा यो अगमवक्ताहरू, भविष्यवाणीहरू र चमत्कारहरूको बारेमा पनि छ, र तिनीहरू पनि गायब भएका छन्। मन्दिर र बलिहरू पनि हराए। त्यस्तै दासत्व र अधिक र अधिक छ। हामीले फेला पारेका छौं कि कहिलेकाहीं टोराहले टोरा दिने समयका मानिसहरूलाई बोल्छ, र त्यहाँ परिवर्तनहरू छन् जुन टोराले सम्बोधन गर्दैन। किन भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ, तर यी तथ्यहरू हुन्।
अगमवक्ताहरू, भविष्यवाणीहरू, चमत्कारहरू, मन्दिर, बलिदान, दासत्व, आदिको लागि, यी चीजहरू हुन् जुन त्यहाँ कुनै प्रतिज्ञा छैन जुन पुस्तासम्म खडा हुनेछ। कुनै न कुनै बिन्दुमा घटेका उदाहरणहरू मात्र छन्, तर भविष्यमा पनि त्यसैको अपेक्षा किन गर्ने ? तर इनाम र सजायको सम्बन्धमा, Gd ले टोराहमा स्पष्ट रूपमा लेखे कि त्यहाँ मिट्जभोसको पालना र केही इनामको बीचमा पुस्ताको लागि सम्बन्ध छ, त्यसैले मसँग यो सम्बन्ध भविष्यमा अवस्थित हुने आशा गर्ने राम्रो कारण छ, र यदि हामी निष्कर्षमा पुग्छौं कि यसले गर्छ। अवस्थित छैन यो टोरा सत्यको बलियो प्रश्न हो, होइन? यस प्रश्नको लागि मैले सोच्न सक्ने एक मात्र व्याख्या भनेको कथनहरू हुन्: "अल्मा लिखा टापुमा मित्ज्वाहको इनाम" र त्यसपछि हामीले "र मैले तपाईंको वर्षालाई निर्धारित मौसममा दिएँ" जस्ता पदहरूबाट सरललाई उखेल्नुपर्छ र सेट गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई अर्को संसारमा ज्यालाको लागि दृष्टान्तको रूपमा। तर यो अझै पनि गाह्रो छ, किनकि कुनै पनि बाइबल धेरै सरल छैन।
मैले बुझिन। भविष्यवाणीको विषयमा धेरै आज्ञाहरू समावेश छन्। पुस्ताको लागि mitzvos हुनु हुँदैन? परमेश्वरको कामको अंश हाम्रो लागि अगमवक्ता र उहाँको आध्यात्मिक नेतृत्व सुन्नु हो। यो केहि केस होइन जसमा हामी अगमवक्ता थिए। यो टोराहले प्रतिज्ञा गरेको थियो र उनको आवाज सुन्न प्रयास गर्न आदेश पनि दियो। अगमवक्ता पनि युद्धमा जाने संयन्त्रको भाग हो।
यदि हामीले आज्ञाहरू पालन गर्यौं भने हामीलाई वर्षा दिइनेछ भन्ने प्रतिज्ञाहरू, वर्षा Gd मा निर्भर हुँदा अवधिसँग सम्झौता गर्ने प्रतिज्ञाहरूद्वारा व्याख्या गरिन्छ। जब यो उहाँमा निर्भर हुन्छ तब निम्न पालना दिइनेछ। अब उसले हामीलाई दिने निर्णय गरेको छ किनभने हामी हुर्केका छौं, र यो स्पष्ट छ कि अब देखि यो अप्रासंगिक छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो नीतिको व्याख्या गर्नुहुन्छ: जब म केही दिन्छु त्यो आज्ञाहरूको पालनाको लागि हो।
अगमवक्ताको लागि, यो व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएको छ: "किनकि तिमीहरूका बीचमा एक अगमवक्ता खडा हुनेछन्", यहाँ पुनर्स्थापनाको कुनै प्रतिज्ञा छैन। अर्थात्, अगमवक्ताको परीक्षासँग सम्बन्धित सबै आज्ञाहरू अस्तित्ववादी आज्ञाहरू हुन् - यदि एक अगमवक्ता स्थापित हुनुपर्दछ भने, त्यसो होस्। जस्तै यदि तपाईंले चार पखेटा भएको लुगा लगाउनुभयो भने, तपाईंले त्यसमा झोला लगाउनु पर्छ। Mitzvah कहिल्यै खडा हुँदैन, तर सधैं व्यवहार्य हुनेछैन। तर इनाम र सजायको बारेमा बोल्ने पदहरूको बारेमा के अद्वितीय छ कि तिनीहरूसँग सम्बन्ध छ यदि हामीले A. - तब भगवानले B गर्नुहुनेछ। सम्बन्ध आफैंमा कुनै पनि परिस्थितिमा सशर्त हुँदैन। देखिन्छ कि जडान सधैं अवस्थित छ। एकपटक हामी निष्कर्षमा पुग्छौं कि यो जडान अवस्थित छैन, त्यहाँ टोराको विरोधाभास देखिन्छ। तपाइँ तर्क गर्न सक्नुहुन्छ कि टोरामा अवस्थित हरेक दावी पुस्ताको लागि आवश्यक छैन। तर त्यसपछि उहाँ आज्ञाहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छ भन्न बाध्य छन्।
यो जडान वास्तविकतामा देख्न नसकिने, तर यो लुकेको तरिका (अनुहार लुकाउने) मा अवस्थित छ भनेर मात्र किन नभने?
तपाईंले झूटा अगमवक्तासँग सम्बन्धित पदहरू ल्याउनुभएको छ। आखिर, अगमवक्तासँग सम्बन्धित पदहरू (व्यवस्थाविवरण):
प्रवक्ता Mkrbc Mahic Cmni Ikim तपाईलाई Ikok तपाईको ईश्वर देवी Tsmaon: Ccl Asr साल्ट मम Ikok तपाईको भगवान Bhrb Hkhl मा छोड्दै, Asf Lsma मा कोल Ikok Alhi र ब्रिगेड Hgdlh Hzat न Arah एक थप, र La Amot भने: र मैले भने। देवी हिटिबो अस्र डब्रो: प्रवक्ता अकिम ल्ह्म एमक्रब अहिह्म र सायद न्यूवेना: र जनरल आइल्याण्डर, भगवानले व्हेराग्रामलाई कुनै आपत्ति जनाएनन्: " शवुआ ज्याका टापु
वैसे, सही परिभाषा एक अस्तित्वात्मक mitzvah होइन तर एक सशर्त सकारात्मक mitzvah (एक ट्यासल जस्तै) हो। लगभग हरेक सकारात्मक mitzvah सशर्त छ। एक अस्तित्व मिट्ज्वा एक मिट्ज्वा हो जसलाई समाप्त गर्न सकिदैन तर मात्र राखिन्छ। यी mitzvot रद्द गर्न सकिन्छ (यदि परिस्थिति अवस्थित छ - एक कपडा र पखेटा लगाउनुहोस्, र mitzvah नगर्नुहोस्)।
अन्तिम प्रश्नको रूपमा, यो पक्कै पनि भन्न सकिन्छ कि परमेश्वरले निरन्तर हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ तर जब हामीले जाँच्छौं उहाँ हामीलाई भ्रमित गर्न प्वालमा हतार गर्नुहुन्छ। त्यो मलाई असम्भव सुनिन्छ। हरेक पटक मैले संसारमा के भइरहेको छ भनेर हेर्छु चीजहरूको प्राकृतिक र सामान्य व्याख्या हुन्छ। प्रकृतिको नियमले काम गर्छ, र जब तपाइँ तिनीहरूलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुहुन्छ, के हुन्छ भन्ने आशा गरिन्छ। यहाँ यस्तो अनौठो लुकाउने खेल छ भनी अनुमान गर्ने कुनै कारण छैन। यो प्रमाण होइन तर सामान्य ज्ञान विचार हो। जब म चलिरहेको शरीर देख्छु, मेरो अनुमान यो हो कि बलले त्यसमा काम गर्यो र यो होइन कि भगवानले बल बिना यसलाई सार्न निर्णय गर्नुभयो। यसबाहेक, म यो पनि मान्छु कि त्यहाँ शरीरहरू छन् जुन शक्ति बिना चल्छन्। यो स्वीकृत वैज्ञानिक अवधारणा हो र यो पूर्णतया व्यावहारिक र मलाई काम गर्ने सुनिन्छ।
न त यी पदहरूले अगमवक्ता कहिले स्थापित हुनेछन्, वा कति पटक संकेत गर्दछ। सामान्यतया, प्रकारका दावीहरू: भगवानले X बनाउनु हुनेछ खण्डन योग्य दावीहरू होइनन् (किनभने दावीको लागि कुनै समय सीमा तोकिएको थिएन)। तर प्रकारका दाबीहरू: यदि X हुन्छ भने भगवानले Y बनाउनुहुनेछ X हुन्छ र Y मापनयोग्य छ भनेर खण्डन गर्न सकिन्छ। त्यसैले दोस्रो तर्कलाई सम्बोधन गर्न तीनवटा विकल्पहरू छन्। वा भन्नुस X वास्तवमा भएको थिएन। वा भन्नुहोस् कि Y मापन योग्य छैन। वा दावी खण्डन गरिएको छ भन्न। तर यदि यसलाई खण्डन गरिएको छ भने, यो सामान्य रूपमा टोरामा दावीहरूको शुद्धताको बारेमा साधारण प्रश्न होइन।
यहाँ कुनै पनि कुरा वैज्ञानिक अर्थमा अस्वीकार्य छैन। पानी पर्नको लागि कति आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ? कति जना मानिसहरूले यी आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ? कति बर्षा हुन्छ, कति दिन पर्ला ? यो अगमवक्ता को मामला को रूप मा खण्डन योग्य छ।
जसरी मैले लेखेको छु, भगवानले हस्तक्षेप गरिरहनु भएको छैन भन्ने मेरो धारणा वैज्ञानिक खण्डनको नतिजा होइन, तर सामान्य धारणाको हो (हस्तक्षेप गरिरहेको जस्तो लाग्दैन)। तथ्य यो हो कि हामी जुन अवस्थामा छौं, म दावी गर्छु कि परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न र धेरै विश्वासीहरूले त्यस्तै सोच्छन्। तिनीहरू सोच्छन् कि mitzvos गर्दा पानी पर्छ र मलाई लाग्छ कि कुनै सम्बन्ध छैन। तपाईको आँखाले देख्छ कि वास्तविक स्थितिले यहाँ कुनै पनि कुराको पुष्टि वा खण्डन गर्दैन।
म बुझ्छु कि यो वैज्ञानिक रूपमा खण्डन योग्य छैन, तर एक सामान्य छाप पनि मेरो लागि खण्डन गर्न पर्याप्त छ (शब्दको तार्किक-गणितीय अर्थमा होइन)।
अगमवक्ताको कुरा र वर्षाको कुरा बीचको भिन्नता भनेको आज्ञा र इनाम बीचको सम्बन्ध (सामान्य अर्थमा) अपेक्षाकृत तुरुन्तै हुनुपर्छ। त्यो हो, यदि इजरायलका मानिसहरूले आज्ञाहरू अनुसार काम गर्छन् भने, परमेश्वरको प्रतिक्रियाले तिनीहरू उचित समय भित्र आइपुग्नेछ भन्ने अर्थ दिन्छ (केही महिना भित्र भन्नुहोस् र 700 वर्ष पछि होइन)। तर अगमवक्ताको मामिलामा, 3000 वर्षमा एक पटक एक अगमवक्ता पठाउन भगवान विरुद्ध कुनै निषेध छैन। यहाँ कुनै "समयको उचित अवधि" छैन जुन कल्पना गर्न सकिन्छ।
मैले बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईंले आफ्नो धारणा र पदहरूबाट निस्कने स्पष्ट सन्देश बीचको अन्तरविरोधलाई कसरी पुल गर्नुहुन्छ। तपाईंले पहिले यस प्रकारको जवाफ लेख्नुभयो: "उहाँले हामीलाई आफ्नो नीतिको व्याख्या गर्नुहुन्छ: जब म केहि दिन्छु त्यो मिट्जभोसको पालनाको लागि हो।" म त्यो व्याख्या स्वीकार गर्न सक्छु। तर तपाईको विचारमा यो नीति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने भन्न गाह्रो छ ?
उसले कार्यान्वयन गर्छ। संसारलाई जब उहाँले केहि दिनुहुन्छ यो आज्ञा पालन गर्नु हो। अचेल दिदैनन्, विगतमा दिउँथे । आजकल उहाँले पठाउनुभएको विगतमा भविष्यवक्ताहरू पठाउँदैनन्। यो एक नीति हो जुन परिवर्तन भएको छ (दिने र प्रार्थना बीचको सम्बन्ध होइन तर आफै दिनुहोस्)।
र त्यो भन्दा माथि, मैले तपाईलाई लेखेको रूपमा, फूक हेजी कि वर्तमान अवस्थामा उसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ वा छैन भन्नेमा बहस सुरु भएको छ। त्यसोभए कसैले पनि दाबी गर्न सक्दैन कि वास्तविकता आफैंले हस्तक्षेप देखाउँछ, प्रभाव र सामान्य ज्ञानको कारणले पनि। त्यसोभए म जे भए पनि तपाईले यो कथनको उद्देश्य के हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। सम्भवतः एक सामान्य कथन जुन प्रायोगिक रूपमा जाँच गरिनु हुँदैन, र यसले mitzvos को महत्व देखाउँछ। Mitzvos को महत्व आज पनि अवस्थित छ। तथ्यहरू परिवर्तन हुन्छन् तर पाठ शाश्वत हुन्छ।
29 Elul 09 - 2016/15/04 XNUMX:XNUMX बजे
शालोम वेशा रब्बी रब्बी माइकल,
मिस्टर सिट्स्रोबाट सुरु गरौं, त्यसपछि टोरामा डेरेच एरेट्ज केडमाको अर्थ नयाँ होइन र यदि यो अर्थ होइन भने यहाँ एक प्रकारको विद्रोह मात्र छ [मसँग Gd को दास हुनुको अलावा व्यक्तित्व छ]।
किनकि यसले वास्तवमा के फरक पार्छ यदि नियमहरू हलाखिक वा राजनीतिक छन् भने राजनीतिक कानूनहरू [मानव] प्रबुद्ध र हलाखिक कानूनहरू केवल कष्टप्रद र दयाको कुरा हुन् भन्ने भावना बाहेक,
पोनिभेजको रब्बीको लागि, यो निवेदन हलाखिक छ, उसको गैर-वचन पनि छ, यो स्पष्ट छ कि उनले हलाखाको कारणले प्रशंसा भनेनन् र भिखारीले पनि आफ्नो विचारमा सोही कारणले भनेनन्,
यो पनि स्पष्ट छ कि तपाईले हिलेल भन्नुभएको छ किनकि यसरी हलखाह निर्धारण गरिएको थियो, यदि तपाईले भन्नुहुन्न भने,
इजरायलमा पर्यवेक्षणको अभावको प्रकाशनको सन्दर्भमा, फेरि किन यसले मद्दत गर्दछ र कसलाई,
"एक अनुत्तरित प्रार्थना," यो इजरायलका मानिसहरूलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउन र उहाँलाई उहाँको सृष्टिकर्तासँग जोड्न धेरै नजिक हुनुपर्छ।
र त्यो पनि, तपाईं कहाँबाट आउनुभयो?
म यस्तो उत्तेजकताको लागि रुन्छु, तपाईं एक बुद्धिमान मान्छे, मलाई आफ्नो उल्टो अनुभव बताओ,
म भावना संग बहस गर्दिन। सबै र तिनीहरूको भावना।
यदि तपाइँ भन्नुहुन्छ कि सबै कुरा गयो (र यो सत्य होइन), प्रश्न अझै पनि यो नियम प्रतिबिम्बित छ। यी अनुमानहरू यसमा सम्मिलित छन्।
अटेन्डेडको प्रकाशनले उनीहरूलाई धेरै मद्दत गर्दछ जसले आफूमा काम भइरहेको महसुस गर्छन् र त्यसैले सम्पूर्ण परम्परा त्याग्छन्। म ती दर्जनौं भेट्छु। स्वीकृत सामग्री प्राप्त गर्नेहरूले सामान्य सन्देशहरूमा आफूलाई कम मूल्याङ्कन गरिरहनेछन्। मेरो अनुभूति हो कि कसैले सीधा सोच्नेहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यो पनि उल्लेख गर्न लायक क्षेत्र हो। सत्यको महत्व होइन गाउँका मुर्खहरूका लागि मात्रै सरोकार छ भन्ने दाबी र सत्यलाई प्रकाशित नगर्ने पवित्र झूटको नीतिले नै हाम्रा असल सन्तानहरू गुमाउने र यी लुक खानेहरूसँगै बस्ने कारण हो। यो मेरो विपरीत अनुभव हो। तपाईंले सोध्नुभयो, त्यसैले मैले भने।
तपाईको जस्तै डरबाट सत्यको बिरूद्ध पुरातन स्रोतहरूमा टाँसिने कुरामा, मसँग योमा सेट एबीमा गेमारा ल्याउन बाहेक केही छैन:
डमार रब्बी येहोशुआ बेन लेवी: किन यसलाई नेसेटका सदस्यहरू भनिन्छ - जसले मुकुटलाई यसको पुरानो महिमामा पुनर्स्थापित गर्यो। अता मोशेले महान् र भयानक महामानवलाई अटा यर्मियालाई भने र भने: कर्क्रिनबाट विदेशीहरू उसको मन्दिरमा, अया उसको डरलाग्दो? भयानक भनेका छैनन् । अता डेनियल, भन्नुभयो: विदेशीहरू उहाँका छोराहरूमा दास छन्, अया उहाँका नायकहरू? हिरो भनेनन् । उहाँसँग उहाँ छैन र तिनीहरूले भने: बरु, यो उहाँको वीरताको वीरता हो जसले उसको प्रवृत्तिलाई जित्छ, जसले दुष्टहरूलाई लम्बाइ दिन्छ। र यी उसको डरलाग्दो कुराहरू हुन् - कि धन्यको डर बिना राष्ट्रहरू बीच कसरी एक राष्ट्रको अस्तित्व हुन सक्छ? र रब्बानान हिची मेरो दास र टेकनाट डटकिन मोशेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो! रब्बी एलजारले भने: उहाँलाई धन्यमा थाहा छ कि उहाँ साँचो हुनुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूले उहाँलाई झूटो बोलेनन्।
म मेरा दावीहरूलाई प्रमाणित गर्छु र तिनीहरूलाई विभिन्न स्रोतहरू, Leibowitz (जससँग म लगभग कुनै पनि कुरामा असहमत छैन) वा अरू कसैबाट आकर्षित गर्दैन। यदि तपाईंले तिनीहरू र Leibowitz बीचको समानता फेला पार्नुभयो भने यो तपाईंको निर्णय हो, तर यसको छलफलसँग कुनै सरोकार छैन। अरूको नाराअनुसार विश्वदृष्टिकोण बनाउने प्रचार गर्नेले यस्तो प्रवृत्तिका लागि अरूलाई दोष दिनु दुःखको कुरा हो। Momo मा अयोग्यता।
रब्बी माइकल शावुट टोव
अर्थात्, मलाई लाग्दैन कि प्रोविडेन्स र प्रार्थना पवित्र झूटको श्रेणीमा छन्,
त्यसैले मैले तिमीलाई सोधें तिमी कहाँबाट आयौ,
पूर्णतया सहमत हुनुहुन्छ कि मानिसहरू सत्य बोल्नको लागि सोध्छन् वा हिचकिचाउँछन् [र त्यस्ता दर्जनौंले प्रचारलाई र विशेष गरी निजी पर्यवेक्षण र प्रार्थनाको सन्दर्भमा औचित्य दिँदैनन् जबकि विश्वासीहरूको ठूलो बहुमतले सबैको नजर र निजी पर्यवेक्षण महसुस गर्दछ]
मलाई लाग्दैन कि निजी पर्यवेक्षण र प्रार्थना सत्य बोल्ने वा यसको अनुपस्थिति वा प्रकाश आवश्यक पर्ने चीजहरूको बारेमा प्रश्नहरूको अंश हो।
क] किनभने यस्तो हो भनेर भन्न आवश्यक छैन,
B] कुनै पनि हिसाबले योगदान गर्दैन,
C] यदि परमेश्वरले निर्दोष व्यक्तिलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसो गर्नुहुन्न भने, तपाईले वास्तवमा उसलाई छिमेकीको रगतमा खडा नभएकोमा दोष दिनुहुन्छ [यो सत्य हो कि ऊ छिमेकी होइन,] वैचारिक रूपमा।
तपाईले निर्णय गर्नु पर्छ कि तपाईको दावी कुराको सार हो, कि मैले भनेको कुरा असत्य हो, वा तपाईले दावी गरिरहनु भएको छ कि मैले "पवित्र झूट" बोल्नु पर्छ मानिसहरूको निर्दोष विश्वासलाई अपमान नगर्नको लागि।
मैले कुनै कुराको लागि भगवानलाई दोष दिएन। उहाँले संसार सृजना गर्न सक्नुहुन्थ्यो जुन कानूनद्वारा शासित हुँदैन तर उहाँले निर्णय गर्नुभयो (र सम्भवतः उहाँसँग चाख्नु भयो) यसलाई कानून अनुसार बनाउने। जे भए पनि, के तपाईंलाई लाग्छ कि उहाँले प्रलय वा अन्य कुनै प्रकोपमा मद्दत गर्न सक्नुभएन? त्यसोभए उसले किन सहयोग गर्दैन? तिमीलाई भन्दा म उसलाई किन दोष दिन्छु जस्तो लाग्छ? र मैले संसारमा मानिसहरूले दुःख भोग्ने भनेर नवीकरण गरें?
तर यी सबै कुराहरू मेरो पुस्तकमा राम्ररी व्याख्या गरिनेछ।
म एकदम स्पष्ट थिएँ,
पहिलो, मैले तपाईको जस्तो दाबी देखेको छैन कि त्यहाँ कुनै पर्यवेक्षण छैन,
न त यो पवित्र झूट हो जस्तो लाग्छ, यदि यो साँच्चै हो भने यसलाई किन छोड्नु हुँदैन,
कानूनको लागि, परिवर्तन नभएको सृष्टि कानूनको तयारी, वा मितिहरू सहितको कानूनहरू?
जहाँसम्म प्रलय आदिको लागि, यदि सबै कुरा खाता अनुसार हो भने, मलाई खाता थाहा छैन, तर यसले मेरो सहज विश्वास र कुनै बोझको विरोध गर्दैन,
यदि कुनै खाता [सुपरिवेक्षण] छैन भने कुशियालाई दुख्तामा फिर्ता,
Haftarah को स्वाद छ, ठीक छ,,,
2. मैले यसलाई छोड्नुको कारण बताए।
3. प्रकृतिका नियमहरू, जुन उनीहरूलाई थाहा नभएको बेला परमेश्वरले आफैंलाई उनीहरूबाट धेरै विचलित हुन दिनुभयो, र आजकल तिनीहरू धेरै परिचित छन् सायद उहाँले त्यसो गर्नुहुन्न।
4. त्यहाँ कुनै प्रश्न थिएन र उनी कतै तानिएनन्। यदि तपाईलाई लाग्छ कि सबै कुरा जायज छ (तपाईले बुझ्दैनन् बाहेक), तब तपाईले मलाई के गाह्रो बनाउदै हुनुहुन्छ? आखिर, मेरो विचारमा, सबै कुरा ध्यान नदिइए पनि, तर पनि जे भइरहेको छ, ठ्याक्कै के हुनुपर्छ, त्यसोभए मेरो विचारमा भगवानलाई के समस्या छ? आखिर, कोही पनि उसले योग्यको भन्दा बढी दुःख पाउँदैन।
29 Elul 09 - 2016/15/07 XNUMX:XNUMX बजे
नमस्ते रब्बी माइकल
तसर्थ, सायद यो राम्रो छ कि यो मामला हो, समस्या अगमवक्ताहरू र धर्मशास्त्रबाट टोराबाट आएको हो, र ताल्मुडमा मात्र लामो मुद्दाहरू थिए भन्ने बहानाले यस कुरालाई विरोध गर्दछ, चाजलमा प्रशिक्षणको समस्या।
मैले धेरै राम्ररी बुझाएँ किन हो यसलाई छोड्नुहोस्,
प्रश्न छ, यसको अर्थ के हो, "यसको अरू कुनै अर्थ छ?"
पहिलो बेतुका छ, दोस्रो, यदि यो कुनै पनि हिसाबले इनाम र दण्डसँग सम्बन्धित छैन भने [के त्यहाँ इनाम र सजाय छ?] यदि त्यहाँ कुनै खाता [पर्यवेक्षण] छैन भने, त्यसपछि वास्तवमा के बाँकी छ .. म प्रयास गर्छु। सफलता बिना परिकल्पना कल्पना गर्न,
मकर शान्ति। मलाई लाग्छ हामी थाकेका छौं।
29 Elul 09 - 2016/15/08 XNUMX:XNUMX बजे
यहाँ ठ्याक्कै मैले थकित महसुस गरेन,
र XNUMX मा मैले लेखेको यो खण्डको केहि जवाफको लागि म खुसी हुनेछु
मलाई पक्का छैन कि मैले यहाँ किन कुराहरू उल्लेख गरिरहेछन्। मलाई लाग्छ कि यसले कानूनद्वारा शासित हुनको लागि परमेश्वरले संसार सृष्टि गर्नुको कारणसँग कुरा गर्छ। म एउटा स्वादको सुझाव दिन सक्छु, उदाहरणका लागि उसले हामीलाई संसारमा आफूलाई अभिमुख गर्न सक्षम भएको चाहन्छ। यदि यसलाई कानुनी रूपमा सञ्चालन गरिएन भने तपाईले कुनै पनि परिस्थितिमा के हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्न र तपाई बाँच्न सक्षम हुनुहुनेछैन।
तपाईंले लेख्नुभएका अरू सबै कुरा मैले साँच्चै बुझिन। तर कृपया यदि त्यहाँ कुनै नयाँ चीजहरू छैनन् भने, हामी यहाँ समाप्त गर्नेछौं। सधैं हरेक इमेलको जवाफ दिने मेरो प्रचलन थियो, तर यो साइटलाई मबाट धेरै समय चाहिन्छ, र यसमा धेरै कुराहरू लेखिएका र भनिएका कुराहरूको दोहोर्याइएको छ।
29 Elul 09 - 2016/15/09 XNUMX:XNUMX बजे
स्पष्ट रूपमा यहाँ इमेलहरू बीच साँच्चै एक भ्रम छ किनभने मैले वास्तवमै बुझिन कि किन हफ्ताराह हामी थकित हुन्छौं जब मैले आफैलाई एक पटक पनि दोहोर्याइएन,
तपाईले लेखेको कुरा म फेरि अपलोड गर्नेछु र यहाँ जवाफ दिनेछु,
रब्बी मकालले लेखेका थिए,,,
1. त्यसैले? [यो व्यक्तिगत ज्ञानको सम्बन्धमा थियो]
2. मैले उसलाई किन नछोड्ने भनेर बताएं। [पर्यवेक्षणको सम्बन्धमा]
3. प्रकृतिका नियमहरू, जुन अज्ञात हुँदा Gd आफैंलाई तिनीहरूबाट धेरै विचलित हुन अनुमति दिनुभयो, र आजकल तिनीहरू धेरै परिचित छन् उहाँले यो गर्नुहुन्न। [मैले नबुझेको वाक्य]
मैले जवाफ दिएँ,
1] त्यसैले सायद यो राम्रो छ कि यो मामला हो, समस्या बाइबलबाट हो जुन विपरित लेखिएको छ र भनिन्छ कि त्यहाँ केवल एक घण्टाको लागि र विवादास्पद अवधिको लागि ताल्मुडमा लामो समस्याहरू थिए, तालमुदमा प्रशिक्षणको समस्या। ऋषिहरू प्रश्नमा खडा हुनेछैनन्,
2] मैले व्याख्या गरेको छु र संक्षेप गर्नेछु, मलाई लाग्दैन कि निजी सुपरिवेक्षण र प्रार्थना सत्य बोल्ने बारे प्रश्नहरू र समाधानहरूको अंश हो वा तपाईंले भन्नु भएको दर्जनौंको लागि यसको अनुपस्थितिमा काम भइरहेको छ जस्तो लाग्छ विशेष गरी जब त्यहाँ कुनै आवश्यकता छैन। भन्नु साँच्चै यस्तै हो,
4] तपाईंले लेख्नुभयो कि हुनसक्छ Gd ले नहेर्नको उनको निर्णयमा एउटा बिन्दु छ र यसले उसलाई लागू हुने जिम्मेवारीको प्रश्नको विरोध गर्दैन,
मैले सोधे, यदि यसको स्वाद हामीलाई थाहा नभएको कुरा हो भने तर्क, यो बेतुका लाग्छ,
यदि स्वाद अपरिचित तर प्रशंसनीय तर पुरस्कार र सजायसँग सम्बन्धित छैन [र यदि कुनै हिसाब र सुपरिवेक्षण छैन भने सायद छैन] म यहाँ एक पक्ष देख्दिन,
तपाईं आफैलाई दोहोर्याउनुहोस्।
1. मैले भने कि म जस्तो कसैले नभनेर मलाई फरक पर्दैन। मैले किन स्पष्टीकरण दिनु पर्छ?
2. र मैले किन हो यसलाई छोड्ने बताए। मैले भने कि मैले धेरै मानिसहरूलाई भेटें जसको प्रार्थना र पर्यवेक्षण ठ्याक्कै समस्याहरू थिए। यहाँ के नवीकरण गरिएको छ?
3. विगतमा विज्ञान थाहा थिएन र मानिसहरूलाई प्रकृतिको नियम थाहा थिएन। त्यसैले तिनीहरूबाट विचलित हुनु अधिक सम्भावना र स्वाभाविक हो। आज हामी तिनीहरूलाई चिन्छौं। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले आज्ञाहरूका कारण पानी परेको हो भनी सोच्थे। आज हामी पहिल्यै जान्दछौं कि कति पानी पर्यो र कहिले, र यो मौसम विज्ञान को नियम मा निर्भर गर्दछ न कि mitzvos।
4. भगवानले नहेर्नुको कारण छ भनी मैले कहाँ लेखेको छु भन्ने बुझिन। मैले लेखेँ कि उसले हेरेको छैन। स्वाद? सायद यो तथ्य हो कि हामी पहिले नै ठूला बच्चाहरू छौं र हात दिनु हुँदैन। तर सिद्धान्तहरूको पर्वाह नगरी, तथ्यात्मक प्रश्न के उसले वास्तवमा निरीक्षण गर्ने सम्भावना छ? मेरो विचारमा - छैन।
र फेरि म लेख्छु कि हामी थकित छौं।
रब्बी मकालले लेखेका छन्
तर उसले निर्णय गर्यो (र सायद उहाँसँग स्वाद) यो नियम अनुसार गर्न।
सायद यो तथ्य हो कि हामी पहिले नै ठूला बच्चाहरू छौं र हात दिनु हुँदैन।
त्यसोभए साथी रगतको लागि खडा नगरी जवाफ हो ?? ठूला बच्चाहरू ????
यदि यो प्रवृत्ति हो भने हामी साँच्चै थकित छौं तर निराधार कानून उत्सर्जनको मेरो नजरमा तपाई शंकास्पद हुनुहुन्न किनकि मलाई यहाँ धेरै पटक आरोप लगाइएको छ,
मकर शान्ति। तपाईंले पहिले नै मूलमा छलफल गरिसकेका कुराहरू दोहोर्याउनुहोस्।
"तिमी उभिनेछैनौ" भन्ने दावीमा बिहानको अभावको बारेमा मैले पहिले नै व्याख्या गरिसकेको छु जुन तपाईं तर्फ समान रूपमा निर्देशित छ।
मलाई यो साँच्चै मन पर्दैन, तर मेरो लागि हामी सकियो।
नमस्ते रब्बी माइकल,
महामहिमलाई बिचुअल द लाइनहरू पढ्न थाहा छ
मैले जवाफ दिएँ, मेरो तलब र जरिवाना छ, खाता कसरी चलाउने म निपुण छैन,
तर मरेकै कारण रगत बगिरहेको बेला हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, ???
यदि तिमिले अन्त्य गर्यौ भने,,,, जिन्दगी भरी,,
के रब्बीले इजरायलका मानिसहरूलाई दुई हजार वर्षको निर्वासन पछि र प्रलयको अन्त्यको तीन वर्ष पछि प्रकृतिको अपवादको रूपमा आफ्नो भूमिमा फर्केको देख्दैनन्? के यसको श्रेय परमेश्वरको प्रबन्धलाई दिनुपर्दैन र?
इजरायलका मानिसहरूको आफ्नो भूमिमा फर्कनु ऐतिहासिक स्तरहरूमा वास्तवमा एक असामान्य घटना हो, तर इतिहास एक जटिल कुरा हो र त्यहाँ ईश्वरीय हस्तक्षेप थियो कि भनेर थाहा पाउन कुनै तरिका छैन। समग्रमा मलाई लाग्छ कि यो प्रक्रिया यसको संलग्नता बिना नै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। धर्मनिरपेक्ष मानिसहरूले यो प्रक्रिया देख्छन् र तिनीहरूको नास्तिक-वैज्ञानिक विश्वास तोड्दैनन्।
त्यसकारण, "ऐतिहासिक चमत्कार" बाट निष्कर्ष निकाल्नु एक धेरै खतरनाक र अविश्वासी कुरा हो। यो सायद भौतिक चमत्कार भन्दा फरक छ।
अगमवक्ताहरूले पहिले नै मानिसहरूलाई तिनीहरूको भूमिमा फर्कने भविष्यवाणी गरेको तथ्यमा वजन हुन सक्छ, र यस अर्थमा यस प्रक्रियालाई ईश्वरीय संलग्नताको सङ्केतको रूपमा हेर्नको लागि ठाउँ हुन सक्छ। मलाई थाहा छैन। मलाई मात्र थाहा छ कि यदि यो नभएको भए पनि लगभग कसैले पनि उनको बाइबल कण्ठ गरेको थिएन (अधिकतम तिनीहरूले प्रासंगिक पदहरू माग्थे र तिनीहरूलाई आफ्नो सरलताबाट बाहिर निकाल्थे), त्यसैले मलाई धेरै उच्च सांख्यिकीय वजन एट्रिब्यूट गर्न गाह्रो छ। यी भविष्यवाणीहरूलाई। खण्डनको परीक्षणमा खडा नहुने एक थेसिस पनि धेरै प्रभावशाली हुँदैन जब यो सत्य हुन्छ (के पछि, त्यहाँ भविष्यवाणीहरू थिए जुन वास्तवमा सत्य भएनन् र कोही पनि डराउँदैनन्)। अझ के हो, यी भविष्यवाणीहरूले आफैं प्रक्रियामा भाग लिएका थिए (धन्यवाद जसको लागि हामी यहाँ फर्केका छौं)। यो शाब्दिक रूपमा, आत्म-पूर्ण भविष्यवाणी हो।
29 Elul 09 - 2016/15/11 XNUMX:XNUMX बजे
मलाई किक्रो हिब्रूमा भन्नु/लेख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। साथै, उनको नामबाट उद्धरण पब्लियस ट्रेन्टियस ऐशसँग सम्बन्धित छ।
ओह, मैले यो तुरुन्तै प्रकाशित हुनेछ भन्ने सोचेको थिइन तर साइट सम्पादकलाई पठाइनेछ। तपाईं यो टिप्पणी र यो भन्दा पहिले मेटाउन सक्नुहुन्छ।
वास्तवमा यो मलाई आउँछ, तर मेरो कम्प्यूटरले प्रतिक्रिया दिदैन। त्यसैले मैले प्रकाशनलाई अनुमोदन गरें र अब मात्र म मेरो आफ्नै प्रतिक्रिया पठाउन सक्षम भएँ। उनी हुन्:
किन मेटाउने? दुई टिप्पणीहरू जुन हाम्रा सबै पाठकहरूले सिक्नुपर्छ। पहिलो को लागी म पक्का छैन। ल्याटिनमा नाम सिसेरो हो, र मैले किन नामको उच्चारण परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर देख्दिन। यदि संयुक्त राज्यमा कसैलाई डेभिड भनिन्छ भने, के मैले उसलाई हिब्रूमा डेभिड भनिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
र मैले ल्याटिन सीलाई हिब्रू बाँदरमा किन अनुवाद गर्ने (मूलमा सिजरको सट्टा सिजर जस्तै) बुझिन।
दोस्रोको सन्दर्भमा, धेरै धेरै धन्यवाद। वर्षौंसम्म मैले सोचें कि यो बाङ्गो थियो। तिमी अब एक च्याम्पियन र ज्ञानी रब्बी हुनुहुन्छ।
मैले तपाईंको दोस्रो प्रतिक्रिया पनि पठाएँ, तर त्यो तार्किक रूपमा बुझ्नको लागि मात्र हो। यदि तपाईंले देख्नुभयो कि पहिलो सिधै साइटमा आयो (यसैले तपाईंले सोच्नुभयो), त्यसपछि तपाईंले दोस्रो एक समान हो भनेर बुझ्नुपर्छ। उल्लेख गरिए अनुसार, मैले अपलोड गर्नका लागि दुबै स्वीकृत गरें (यसरी सफ्टवेयर बनाइएको छ कि सबै कुरा मलाई आउँछ)। म अनुपयुक्त चीजहरू बाहेक (जुन बीचमा BH अवस्थित थिएन) बाहेक सबै कुरालाई अनुमोदन गर्छु।
हामी दुवै कुलपितामा (पी. सम्पत्ति टोराह, सी):
जसले एक अध्याय वा एक हलाखाह वा एक पद वा एक माहुरी एक अक्षर पनि सिक्छ उसलाई सम्मानको साथ व्यवहार गर्नुपर्छ किनभने हामीले इजरायलका राजा दाऊदलाई आज्ञा दिएका थियौं जसले अहीथोफेलबाट सिक्नुभएन तर दुईवटा कुरा मात्र पढे र उहाँको महान् रब्बी पढे र थाहा पाए। कि यो भनिएको थियो र ज्ञानी र चीजहरू सजिलो र भौतिक होइन र के डेभिड मेलेक इजरायल जसले अहिथोफेलबाट सिक्न सकेन तर केवल दुई कुरा पढ्छन् रब्बी अलुफु र उनको परिचित जसले आफ्नो लेखकबाट सिक्छन् एक अध्याय वा एक हलाखाह वा एक पद वा एक मौरी पनि। एउटा पत्रमा कति र कति सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै सम्मान छैन तर टोराहले भन्यो + हितोपदेश XNUMX: XNUMX + सम्मान ऋषिहरूले उत्तराधिकार पाउनेछन् + शेम / हितोपदेश / XNUMX Y + र निर्दोष मानिसहरूले असल हकदार हुनेछन् र टोरा बाहेक अरू कुनै राम्रो छैन। भनिन्छ + शेम / हितोपदेश / XNUMXb
र BM Lag AA मा पनि:
रब्बानन दिनुहोस्: रब्बी जसले भन्यो - रब्बी जसले बुद्धि सिक्यो, र रब्बी होइन जसले बाइबल र मिश्नाह, रब्बी मीरका शब्दहरू सिके। रब्बी येहुदा भन्छन्: उहाँको धेरैजसो बुद्धि सही छ। रब्बी योसी भन्छन्: उसले एक मिश्ना बाहेक आफ्नो आँखालाई पनि उज्यालो पारेन - यो उनको रब्बी हो। रबाले भन्नुभयो: जस्तो वस्तु रब्बी, दासबर्न जोह्मा लिस्ट्रोन।
अनि विद्यार्थीले आफ्नो गुरु, आफ्नो च्याम्पियन र चिनजानका शब्दहरू मेटाउनु उचित हुन्छ?
केही हदसम्म अतिरञ्जित प्रशंसाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद :)। सायद मैले यहाँबाट रब्बी दर्जनौं काउन्टरहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि पाठ लिनेछु। तपाईंको व्याख्यान र प्रकाशनहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जसले मेरो लागि धेरै क्षेत्रमा ढोका खोल्यो, र धेरै अन्य क्षेत्रमा मेरो ज्ञानलाई समृद्ध बनायो। म यसलाई "चकलेटबाट प्रमाण" भन्नेछु। 🙂), मेरो दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनायो, र कहिलेकाहीँ मेरो आत्माको लागि छुट्टीको आविष्कार गरे।
र ठ्याक्कै यसको कारणले गर्दा, म रब्बीलाई "हलाचालाई निर्देशन" दिन चाहन्न। र मैले मेटाउन सुझाव दिएँ, किनकि रब्बीले उपयुक्त पाएको खण्डमा लेखको मुख्य भाग सच्याउन पर्याप्त हुनेछ, र यसले प्रतिक्रियाको उपस्थितिलाई फरक पार्दैन। साथै, उल्लेख गरिएझैं, मैले त्रुटिको लागि लहराती ब्रशको साथ संकेत गर्न असहज महसुस गरें, यदि वास्तवमा यो त्रुटि हो।
वास्तवमा, मेरो ज्ञानको राम्रोसँग, ल्याटिन उच्चारण वास्तवमा सिसेरो हो (समकालीन अंग्रेजीमा, सायद विचारकहरूले यसलाई विकृत गरेका छन्)। डेभिडको प्रश्नले एउटा समस्या प्रस्तुत गर्दछ जब यो एक नामको लागि आउँछ जुन उत्पत्तिको रूपमा चिनिन्छ तर विभिन्न संस्कृतिहरूद्वारा फरक तरिकाले प्रयोग गरिएको छ, र नामको प्रयोगलाई शब्दांश अनुक्रम वा शब्दको रूपमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि समस्या खडा गर्दछ। वस्तु पनि यसको अर्थमा। तर मलाई यस्तो देखिन्छ कि उपनाम Chitsro, यदि यो वास्तवमा इजरायलमा मान्यता प्राप्त छ भने, यो प्रभावशाली छैन, र यस्तो सांस्कृतिक आरोप लाग्दैन कि सिसेरोको प्रयोग मानिसहरूलाई बुझ्न नसकिने वा नामको अर्थबाट वञ्चित हुनेछ। । यो पनि मलाई लाग्छ कि स्वीकृत ट्रान्सलिटेरेसन नियमहरूको प्रकाशमा आज Tsizro फारमको प्रयोग कम भएको छ।
तार्किक मनोरञ्जनको लागि, जसलाई भनिएको छ, तर्कको क्षेत्रमा मेरो ज्ञानको पर्याप्त अंशको लागि पनि आभारी हुनुपर्छ, मलाई आशा छ कि मैले पर्याप्त सिकेको छु ताकि म यस्तो सानो कुरामा असफल हुने छैन। मैले मेरो दोस्रो प्रतिक्रिया स्वचालित रूपमा प्रकाशित हुनेछ भन्ने अनुमान गरेँ, तर मलाई पहिलो पटक मेटाउनको लागि मेरो इच्छा व्यक्त गर्ने अन्य कुनै तरिका थाहा थिएन, उनको प्रतिक्रिया बाहेक, जसमा मैले भनेको थिएँ कि म यो संयन्त्रको लागि हो भनेर विश्वास गर्दिन। तत्काल प्रकाशन। मैले अनुमान गरें कि अन्ततः यो विश्वास गर्ने कसैले तिनीहरूलाई देख्नेछ, र भर्खरै उल्लेख गरिएको मेटाउने अनुरोध।
र फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
यो मेरो स्वर्गीय बुबा (जसले ल्याटिन पढ्नुभयो) बाट चलन छ कि उच्चारण मूल रूपमा Tszero (र सिजर) थियो। यहाँ, एक च्याम्पियन र ज्ञानी रब्बी पनि छन्। 🙂
शिव 21 को 02 गते - 2017/14/43 XNUMX:XNUMX बजे
तपाईले दावी गर्नुहुन्छ कि तपाईले कानूनको सेटबाट फराकिलो मूल्य कथन निकाल्न सक्नुहुन्छ, तपाई यसमा बाध्य हुनुहुन्न।
मसँग पनि (केही हदसम्म अझै पनी) यो दृष्टिकोण छ, र यसैले यहूदी धर्मबाट उत्पन्न हुने जातीय केन्द्रवाद वा अराजकताको प्रतिध्वनि गर्न बाध्य महसुस गर्दैन (यसबाहेक, म थिएँ - र केही हदसम्म अझै पनि छु) व्याख्यात्मक minimalism अभ्यास गर्दै र त्यहाँ दावी गर्दै। हलाखामा कुनै "मूल्य कथन" छैन। कुनै पनि कथनहरू उत्पन्न हुँदैनन् - न समस्याग्रस्त न सकारात्मक; केही हदसम्म विश्लेषणात्मक स्थिति)।
तर हालै म नरम भएको छु र म सिद्धान्तमा अवस्थित हुन सक्ने निश्चित मूल्य कथनहरू (ब्याज ऋण अस्वीकार, राजतन्त्रको आकांक्षा, मन्दिरको स्थापना, संसारका सबैलाई यहूदी धर्मको अधीनमा राख्ने इच्छा) लाई स्वीकार गर्ने झुकाव राख्छु, त्यसैले मेरो परिचितको विचार भगवान। तपाईंले केही गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले स्पष्ट रूपमा आदेश नदिनुभएको भए तापनि तपाईंले यो किन गर्नुभएन (अर्थात् दुई कुराहरू परिवर्तन भएका छन् - 1. मैले चिनेको छु कि एक अपमानजनक मूल्य कथन आएको छ 2. म विश्वस्त थिएँ कि शिटिनका कथनहरू हुन्। बाध्यकारी)।
यदि प्रश्न मेरो बारेमा मात्र हो भने, म बहिरा भएँ, तर हाम्रा रब्बीहरूले पहिले नै स्थापित गरिसकेका छन् कि परमेश्वरको इच्छा टोराबाट अलग-अलग बाँधिएको छ - ऋषिहरूका शब्दहरू सुन्ने दायित्व उहाँलाई थाहा छ "(जब अन्तमा Hasbra भगवानको इच्छा स्पष्ट गर्न को लागी एक अनुमान हो)।
अर्थात्, मैले ईश्वरको इच्छा बाध्यकारी कुरा हो भनी स्वीकार गरेपछि, मलाई तर्क गरियो कि ऋषिहरूको दिमाग - कम्तिमा 'नैतिकता' को अनुशासनमा (निश्चय नैतिकताको अर्थमा होइन, तर नैतिकता बैठकहरू जस्तै) - एक हो। बाध्यकारी कुरा किनभने जसरी तिनीहरू हलचालाई बुझ्न र ईश्वरको इच्छा खडा गर्नमा विशेषज्ञ छन्।त्यसको मूल भागमा, तिनीहरू सम्भवतः ईश्वरको इच्छा के हो भनेर बुझ्नमा विशेषज्ञ छन्। तन्नाइम र अमोराइम, जसले स्पष्ट रूपमा कुनै सिद्धान्तको अनुमान लगाउने प्रयास गरेनन् तर त्यस्ता र त्यस्ता मूल्यवान कथनहरू पनि फेला पारे)।
र अब मेरो प्रश्नमा मेरो आत्मा - के तपाइँसँग परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नबाट टाढा रहने बहाना छ जसरी यो टोरा अवलोकनबाट तपाइँको आँखामा प्रकट भएको छ?
यदि म टोराहबाट मूल्य कथन निकाल्न सक्छु भने यो पक्कै पनि मबाट अपेक्षित छ। यो साँच्चै हलचल नभए पनि भगवानको इच्छा हो।
तर ऋषिको मूल्य कथन बाध्यकारी छैन। मेरो विचारमा, ऋषिहरू विशेषज्ञ होइनन् (तपाईले लेखेको जस्तो होइन)। ऋषिहरूको अख्तियार उनीहरू सही छन् भन्ने तथ्यबाट प्राप्त हुँदैन, तर हामीले उनीहरूको अधिकार प्राप्त गरेका छौं भन्ने तथ्यबाट प्राप्त हुन्छ (हेर्नुहोस् Ks। यसका लागि धेरै राम्रो कारणहरू छन्, तर यो होइन किनभने तिनीहरू विशेषज्ञ हुन्। र अब तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि हामीले हलाखिक मुद्दाहरूमा उनीहरूको अधिकार प्राप्त गरेका छौं तर मेटा-हलाखिक वा मूल्य मुद्दाहरूमा होइन। यदि तिनीहरूले यसलाई हलखाहमा समावेश गर्ने निर्णय गरेका छन् भने मात्र (जस्तै सोडोमीको डिग्रीमा जबरजस्ती र यस्तै) यसले हामीलाई बाध्य बनाउँछ। निस्सन्देह, यदि हामी तिनीहरूसँग सहमत छौं भने, हामी त्यसो गर्नेछौं, तर यदि छैन भने, यो आवश्यक छैन। यसको विपरित, यो ठीक उल्टो गर्न आवश्यक छ किनभने हसब्राको बाध्यकारी स्थिति छ।
र परमेश्वरको इच्छा के चाहिन्छ त्यो येशिवोटको टाउकोबाट होइन जसले केहि स्थापना गर्यो तर गेमारा र सबै पहिलोहरूबाट हो, र चीजहरू पुरातन छन्। यद्यपि यसमा पनि विभिन्न गल्तीहरू छन्, र व्याख्याको लागि साइटमा यहाँ लेखहरू हेर्नुहोस्: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
र अतिरिक्त सामग्री
25 सिवन 06 - 2019/15/38 XNUMX:XNUMX बजे
सिवन एटी मा BSD XNUMX
प्रलयको सम्झनाको लागि एक दिन सेट गर्ने विषयमा रब्बीहरू बीचको छलफलमा - रब्बी शमुएल काट्जका लेखहरू, 'विनाश र सम्झना' र 'पहिलो प्रलय दिवस', र रब्बी येशायाहु स्टेनबर्गरको लेख, द वाउण्ड बिफोर हिलिंग हेर्नुहोस्। तीनवटै वेबसाइट 'शब्बत सप्लिमेन्ट - मकोर रिशोन' मा, र माथिका लेखहरूमा मेरो प्रतिक्रियाहरूमा।
२६ Kislev 24 - 12/2019/12 23:XNUMX बजे
म यस साइटमा पहिलो पटक सामग्री पढ्दैछु र मलाई थाहा छैन कि मेरा प्रश्नहरू वा तिनीहरूका जवाफहरू लेखहरूमा वा यहाँ उत्तरदाताहरूको प्रश्नहरूमा देखा परेका छन् भने म अग्रिम माफी चाहन्छु।
1. यदि तपाईंलाई लाग्छ कि परमेश्वरले हाम्रो संसारमा के भइरहेको छ त्यसमा हस्तक्षेप गर्न छोड्नुभएको छ भने, तपाईं यहूदी धर्मका आधारभूत अवधारणाहरूलाई संक्षिप्तमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ।
बि. इनाम र दण्ड - मलाई यस्तो देखिन्छ कि माइमोनाइड्स (मैले मेमोरीबाट लेखेको छु र पुस्तकको समीक्षाबाट होइन) दावी गर्दछ कि संसारको प्राकृतिक पाठ्यक्रम यहूदीहरूको निजी व्यवहारको परिणामको रूपमा सञ्चालन भएको हो र मैले तपाईंको दिए। समयमा वर्षा, आदि
2. के तपाईलाई दिनको3पटक प्रार्थना गर्नु अनावश्यक भएको जस्तो लाग्छ किनभने त्यहाँ बोल्ने कोही छैन? के त्यो सबै हलाखिक शुल्क छोडिएको छ जुन खाली गरिएको छ सायद तपाईका आवश्यकताहरू दिन सक्ने कसैबाट माग्नुको मुख्य कारण हो?
के रोश हशनाहलाई छोड्न सम्भव छ जहाँ संसारका सबैजना मेरोनका छोराहरूको रूपमा उहाँको अगाडि जान्छन्?
4. शिव सुत्न गएको भनाइ गर्नेहरूले उहाँको इज्जत र म खुलाई तुलना गर्न चाहँदैनन्? वा आफ्नो संसार छोडेर?
यदि चीजहरू पहिले नै साइटमा छलफल गरिसकिएको छ भने, यदि तपाइँको समयले तपाइँलाई टिप्पणी गर्न अनुमति दिँदैन भने म सान्दर्भिक ठाउँहरूको सन्दर्भको लागि समाधान गर्न पाउँदा खुसी हुनेछु।
24 Kislev 12 - 2019/17/22 XNUMX:XNUMX बजे
तपाईंले धेरै फराकिलो प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ र यहाँ सम्बोधन गर्न गाह्रो छ। तपाईंले यी र अन्य विषयहरूमा मेरा सबै शिक्षाहरू नयाँ त्रयीमा पाउनुहुनेछ, र यी विषयहरूमा दोस्रो पुस्तक (आत्मामा कुनै मानिस शासक छैन) मा पाउनुहुनेछ। त्यस बाहेक तपाईले यहाँ साइट खोज्न सक्नुहुन्छ र यी प्रत्येक प्रश्नहरूको लागि धेरै सन्दर्भहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
बुधवार Tammuz 25 - 06/2020/15 मा 19:XNUMX मा
१) माइमोनाइड्स र त्यस्ता जस्ताको शासनमा गैर-एकरूपताको सन्दर्भमा, यसको मेटा-हलाखासँग कुनै सरोकार छैन, तर हलाखाहको परिभाषा निश्चित विधिबाट गरिन्छ तर यसको नियम सम्बन्धित छैन (सायद यो पनि हुन सक्छ। यो आवश्यक रूपमा सम्बन्धित छैन भने)।
उदाहरणका लागि: "एआर अचा बर हानिना पहिले देखिने र ज्ञात छ जसले रब्बी मीरको पुस्तामा उहाँ जस्तो कोही छैन र उहाँ जस्तो हलखाह स्थापना गरेनन् कि उहाँका साथीहरू अन्तमा उभिन सकेनन् भनेर भन्ने र संसारलाई थाहा थियो। उसको विचारमा उसले शुद्ध अशुद्धको बारेमा भन्यो र उसलाई शुद्धमा अनुहार देखाउँदछ। हामी देख्छौं कि ऋषिहरूलाई थाहा भए तापनि बुद्धिमान रब्बी (र सायद तिनीहरूमध्ये सही) ले आफ्नो जस्तो हलाखामा शासन गर्दैनन्।
एउटै पृष्ठमा पनि (Eruvin XNUMX :) कारण शाबास तापीले तिखो बनाएको भए तापनि Halacha Kavah दिइएको छ र यो तिनीहरूको नम्रताको कारण हो र यो मलाई लाग्दैन कि कसैले नम्रताले सधैं सत्यमा लैजान्छ। सत्य (यद्यपि धेरै पटक चीजहरू तीखो र स्पष्ट हुन्छन्)।
मेरो विचारमा, यो धेरै स्पष्ट छ कि हलखाहका विचारकहरू (मध्यस्थहरू भन्दा फरक…) स्पष्ट र एकरूपतामा गएका थिए, आखिर, हामीले तिनीहरूमध्ये धेरै भेट्टायौं जसले सामान्यतया उनीहरूजस्तो शासन गर्दैनन् र केही केसहरूमा मात्र उनीहरूले शासन गरे। तिनीहरूलाई जस्तै। अर्को शब्दमा, माइमोनाइड्सको कुनै मेटा-हलाखिक स्थिरता छैन भन्ने भनाइको कुनै अर्थ छैन किनभने त्यहाँ मेटा-हलाखिकको नियममा अर्थ छ।
2) रब्बीले कुनै कारणको लागि निर्णय गरे कि एक चमत्कार हो कि उहाँ हस्तक्षेप बिना हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। यो परिभाषा कहाँबाट पाउनुभयो ?
यस्तो धारणाको अनौठो कुरा यो हो कि जो कोहीले पनि आफ्नो हातमा बाइबल समातेको छ, यो स्पष्ट छ कि त्यहाँ सबै चमत्कारहरूको बावजुद तिनीहरूले प्रायश्चित र विद्रोह पाप गरे (समयमा रब्बीका अनुसार चमत्कारहरू भए) र यदि हामी चमत्कारहरू भनौं भने। हुनै नसक्ने कुरा हो तब हामीले भन्यौं ती सबै पुस्ताहरू बेवकूफहरूको गुच्छा थिए (डन कु र के आज हजारौंले बाबा र चर्मकारहरूको "चमत्कार" ले पश्चात्ताप गरे र पाप नगर्नेहरू भन्दा पनि धेरै धार्मिक छन्। तिनीहरूबाट नदेखेका दण्डको डर कु छोराको कु छोरा जो त्यतिबेला पापी थिएनन्)
मलाई लाग्छ कि चमत्कार भनेको कम सांख्यिकीय सम्भाव्यता हो जुन हुन्छ र यसैले त्यहाँ अस्वीकार गर्नेहरू (अगमवक्ताहरूको समयमा पनि) यो प्राकृतिक र चमत्कारी होइन भनेर दाबी गर्न खुला छ। यसै अनुसार हाम्रो पुस्तामा पनि चमत्कार छन् । (यो दावीको समस्याको बारेमा मलाई थाहा छ, किनकि यो थाहा हुन्छ कि विज्ञानको उन्नति संग, एक पटक सम्मेलन मानिने कुराहरु लाई कमजोर मानिएको कारण आज हामी थाहा पाउनेछौं कि प्रतिबद्ध थियो। तर अझै धेरै कुराहरु छन् - जब मानिसहरू आफ्नो मातृभूमि फर्कन्छन्
3) रब्बीले लेखे "तर मलाई लाग्दैन कि तिनीहरू यसको अर्थको गहिराइमा गएका छन्। रब्बीको मनसाय बेन-गुरियन जस्तै ऊ एक धर्मनिरपेक्ष जियोनिस्ट थियो भन्नु थियो।"
उहाँका शब्दहरूमा हास्य र स्ट्यान्ड-अप कमेडी राख्नु भएकोमा रब्बीलाई हाम्रो धन्यवाद। यसले पढाइलाई नरम बनाउँछ ...
(मलाई विश्वास छैन कि तपाइँ यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ)।
बुधवार Tammuz 25 - 06/2020/15 मा 28:XNUMX मा
तपाईंले यहाँ विभिन्न ठाउँमा लेख्नुभएको सबै कुरालाई मैले विस्तार गरेको छु।
1. मलाई अब याद छैन उसले के कुरा गरिरहेको थियो (के गैर-एकरूपता)। तर नेसेटको शासनको सन्दर्भमा, मैले एक पटक प्रमाणको रूपमा उद्धृत गरें कि हलाखाह सधैँ सत्य होइन तर स्वायत्तताको मूल्य छ (मेरो विचारमा यो सत्य नभए पनि मैले बुझे अनुसार शासन गर्न)। BS र BH को सन्दर्भमा, टिप्पणीकारहरू यसमा विभाजित थिए। R.I. Karo Gemara को नियमहरूमा वर्णन गर्दछ कि तिनीहरूको नम्रताले उनीहरूलाई सत्यमा लैजान्छ (किनभने तिनीहरूले आफ्नो स्थान बनाउनु अघि B'Sh को शब्दहरू विचार गरे) मैले यसलाई केही पदहरूमा टुबामा विस्तार गरेको छु।
2. यसमा मैले त्रयीको दोस्रो पुस्तकमा Tuba विस्तार गरें (र यहाँ धेरै ठाउँहरूमा साइटमा पनि)। प्रकृति भित्र चमत्कार जस्तो कुनै प्राणी छैन। यसो भन्ने जो कोही अलमलमा पर्छन् ।
3. म विश्वास मात्र होइन तर पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। पोनिवेजका रब्बी कडा धर्मनिरपेक्ष जियोनिस्ट थिए।